အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): 'သမီးလေးရေ...ဟိုး..ရှေးရှေးကပေါ့ကွယ်....
စက်ဘီးနင်းလာသော မောင်ခိုင် ဘာမှပြန်မပြော ။ညတုန်းကကြည့်ခဲ့သည့် ဇာတ်ပွဲထဲမှ စတိတ်ရှိုးခန်းထွက်ချိန်တွင် ကိုကိုကစင်ဒရဲလား ဆိုပြီး ကော့လိုက် ကားလိုက် လုပ်ပြသွားသော မင်းသမီးကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး နင်းလာသဖြင့် မကြားလိုက်ပေ။ မင်းသမီးမှာ ရုပ်သိပ်မချော။ အသားကပ်ဘောင်းဘီပျော့ပျော့ကိုကျပ်ထုပ်နေအောင်ဝတ်ထားပြီး အင်္ကျီကလဲ စွပ်ကျယ်လိုပုံစံကို ဗိုက်သားဖေါ်ဝတ်ထားရာ အကိုကာလသားတို့ မရိုးမရွဖြစ်ချင်စရာ။တင်ပါးကြီးကိုလှုပ်လှုပ်ပြီး ပေါင်တံနှစ်ချောင်းကိုဖြဲကားလိုက် ခုန်လိုက်ပြီဆိုယင်ဖြင့် နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ ဗရမ်းဗတာ လှုပ်ခါလျှက် ၁၈နှစ်သားလူပျို မောင်ခိုင့် မျက်လုံး ထဲက မထွက်အောင် ဖမ်းစားထားလေပြီ။
'အင်း..တော်တော်တောင့်တဲ့မိန်းမ နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုအားရပါးရ ကိုင်လိုက်ရရင်တော့လားကွာ တောက်'
ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိသေးသောကိုလူပျိုပေါက်လေးမို့ စတိတ်ရှိုးတော်ကောင်မလေးရဲ့ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားပေါင်တံခွဆုံကြားမှ စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို လိုးချင်စိတ်ပေါက်ရကောင်းမှန်းမသိဘဲ လှုပ်ခါပြလိုက်သော နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုသာမြင်ယောင်ရင်း လီးတောင်လာလေသည်။
စက်ဘီးနောက်တွင်ထိုင်လိုက်လားသော ထွေးမြသည် ပြန်ဖြေရင်း မောင်ခိုင်အား ခေါင်းကိုလှမ်းခေါက်လိုက်ပြီး
''နင်ဟာလေ ငိုင်တိုင်တိုင်နဲ့ သူများနှုတ်ဆက်နေတာကို''
''ကဲ..ကဲ ..မြန်မြန်နင်း တော်ကြာနေပူနေအုံးမယ်''
''... ..... ....''
''ငါ ညကမုန့်ဟင်းခါးတွေစားတာ များသွားလို့ ဟိုရှေ့က ရေကန်ပျက်ကြီးထဲခဏသွားလိုက်အုံးမယ်''
''သီပ်အလုပ်ရှုပ်တာဘဲ ခြုံတွေထူက ထူနဲ့ မြွေပါးကင်းပါးဟယ်''
''မရတော့ဘူး ခဏလေးပါဟာ နော်''
မောင်ခိုင်မှာ သူ့လီး တစ်အားတောင်နေပါပြီ မနေနိုင်တော့ပါဘူးလို့ အစ်မလုပ်တဲ့သူကိုဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်မလဲ။ဂွင်းထုတတ်တာ မကြာသေး ပွင့်အာကာစ-လီးထစ်ကို တံတွေးစွတ်ပြီးထုလိုက်ရယင် လရေကျဲကျဲလေးများ ထွက်သွားတဲ့အချိန် မျက်လုံးမှေးကျသွားအောင် ကောင်းဘိချင်း။
မောင်ခိုင်လီးမှာ ထွားကာစ ၅လက်မလောက်ပဲရှိပေမယ့် တစ်အားထောင်နေသောကြောင့် မထွေးမမြင်စေရန်လုံခြည်ပြင်ဝတ်သယောင်ယောင် လက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီးထွက်လာခဲ့လေသည်။
'အင်း ဘယ်ခြုံကောင်းမလဲ အမယ်.....ဒီနေရာကအောက်မှာသတင်းစာတွေတောင်ခင်းထားလို့ပါလား'
ကန်ဘောင်အတွင်းဘက်ကျကျ ခြုံပုတ်ထူထူကြီးအောက်တွင်ရှင်းလင်းပြီးအခင်းတွေဘာတွေနှင့်မို့ ဝမ်းသာအားရ တောင်နေသောလီးကို ပုဆိုးပေါ်မှပင်ဆုပ်ကိုင်လျှက် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။
လုံခြုံမှုရှိ မရှိဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်ရာ..
စာအုပ်ပါးလေးကို ဆွဲယူလိုက်သည်။ပထမစာမျက်နှာကို ဆွဲလှန်လိုက်သောအခါ ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ အသက်မရှုမိအောင်ဖြစ်သွားလေတော့သည်။အင်္ဂလိပ်မသည် ပေါင်တံသွယ်သွယ်ဖြူဖြူနှစ်ချောင်းကို ဒူးထောင်ပေါင်ကားပြီး စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို လက်ဖြင့်ဆွဲဖြဲထားရာ နီညိုရောင်စောက်မွှေးများအောက်ဘက်မှ စောက်စေ့နီနီကြီးမှာ အပြင်သို့ပြူးထွက်လို့နေလေသည်။ှဓါတ်ပုံမှာရောင်စုံဖြစ်သောကြောင့် စောက်ခေါင်းထဲမှစောက်ရည်ကြည်လေးများ စိမ့်ထွက်ကျနေသည်ကိုပင်မြင်နေရသည်။ နောက်စာမျက်နှာကိုလှန်လိုက်သည့်အခါ အမဲကောင်ကြီးက ထိုအဖြူမစောက်ဖုတ်ကို လျှာနီနီကြီးဖြင့်အားရပါးရ လျှက်ပေးနေသည်။ထို့နောက်တွင် မြင်းလီးကြီးအလား ကြီးမားရှည်လျှားသော လီးမဲမဲကြီး စောက်ဖုတ်ထဲကို မဆန့်မပြဲ တစ်ဝက်ခန့် ထိုးသွင်းထည့်ထားပြီး..
ထို့နောက်တွင် ပုံစံမျိုးစုံ နည်းမျိုးစုံ အသကုန်လိုးနေကြသည့်ပုံတွေ.......မောင်ခိုင်တစ်ယောက် ဂွင်းမထုလိုက်ရဘဲ
လက်ဖြင့်ကိုင်လိုက်စဉ်ပင် လီးရည်များတစ်ဖျော ဖျောထွက်ပြီး ကာမစည်းစိမ်ထူးကိုခံစား လိုက်ရလေတော့သည်။''ကြာလိုက်တာ ဘာများဖြစ်နေလဲမသိဘူး''
စက်ဘီးကို လမ်းဘေးတွင်ထောင်ထားခဲ့ပြီး ကန်ဘောင်အစပ်မှခြုံနွယ်များကိုဖြဲတိုးကာ မထွေး ဝင်လိုက်လာသည်။တော်တော်နှင့်မတွေ့ လူရိပ်လိုလိုမြင်လိုက်သောကြောင့် အရှေ့ဆက်တိုးပြီး
လက်တစ်ဘက်ဖြင့် စာအုပ်ကိုကိုင်ကြည့်နေပြီး လက်တစ်ဘက်က မာနေဆဲလီးကိုဆုပ်ကိုင်ထားသော မောင်ခိုင်မှာ စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ဖြစ်သော်လည်း အမှတ်တမဲ့လွှတ်လိုက်သောလီးတံမှာ ငေါက်တောက်ကြီး ထိုးထောင်နေတော့သည်။ မထွေးမှာ အစ်မကြီးဆိုသော်လည်း တစ်နှစ်နီးပါးသာ အသက်ကွာရာ ၁၇-၁၈နှစ် အပျိုသွေးကြွကာစအရွယ်ပင်။ လီးထစ်ကြီးလန်ပြီး တောင်နေသောလီးကို မြင်လိုက်ရသောအခါ စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီ မသိ။ ရင်တဖိုဖိုနှင့် ကတုန်ကယင် ။ မျက်နှာလွှဲလိုက်ပေမယ့် မျက်စေ့ထဲမှ မထွက်တော့။ငေါက်စေ့ ငေါက်စေ့နဲ့ အသဲယား စရာပါတော်။
''ပေးစမ်း စာအုပ်...နင်ဘာလုပ်နေတာလဲ ပြောစမ်း''
''မကြည့်ပါနဲ့'' ''ပေးစမ်း ဆို''
စာအုပ်ကိုဆွဲယူပြီးကြည့်လိုက်သောအခါ လီးမဲမဲတောင်တောင်ကြီးကို အင်္ဂလိပ်မ က ပါးစပ်ဖြင့် အားရပါးရ စုပ်နေသော ပုံကိုမြင်လိုက်ရသည်။
'အို.ရှက်စရာ ရွံစရာကြီး မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး လီးကြီးက အကြီးကြီးဘဲကြောက်စရာကြီး' ယောင်ရမ်းပြီး မျက်စေ့ကိုစုံမှိတ်ကာ ပေါင်ခွကြားထဲ လက်ဖြင့်အုပ်လိုက်မိသည်။ထိုအခါ လျော့တိလျော့ရဲဝတ်ထားသော ထမီကိုဆွဲချွတ်သကဲ့သို့ဖြစ်ကာ ဗိုက်သားဖြူဖြူပေါ်သွားလေတော့သည်။
''မထွေး '' ''ဟင် '' ''အို ''
မောင်ခိုင်တစ်ယောက် စိတ်ဆင်ရိုင်းကို မထိမ်းနိုင်တော့။မထွေးကို ဆွဲကာထွေးပွေ့လိုက်သည်။
''မလုပ်နဲ့လေ ..မလုပ်နဲ့ မိုးကြိုးပစ်လိမ့်မယ် ''
ထို့နောက် ပါးပြင်နှစ်ဘက်ကို နမ်းရှုံ့လိုက်ရင်း လက်တစ်ဘက်က အင်္ကျီအောက်ကို အတင်းထိုးနှိုက်လိုက်သောအခါ နှိပ်ကြယ်သီးများမှာ ပြုတ်ထွက်ကုန်သည်။အလွယ်တကူပင် ဘယာစီယာကို အပေါ်သို့ပင်.တင်လိုက်ရာ မောင်ခိုင်မှာ တံတွေးတနင်နင်နှင့် ရေငတ်သလိုလို။အပျိုဖြစ်ကာစ နို့လုံးလုံးလေးသည် အကြမ်းပန်းကန်လုံးသာသာ ။နို့သီးခေါင်းကလေးမှာ ပန်းရောင်သန်းပြီး စူစူကလေးထွက်နေသည်။လူပျိုရိုင်းကလေးမောင်ခိုင် ပွတ်သတ်ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သောအခါ....
'အို..အင်း..ဟင်းဟင်း ရင်ထဲမှာကတုန်ကယင်နှင့် ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိ။ ရင်တွေတစ်အားခုန်နေတာဘဲ သိသည်။ရုန်းထွက်ချင်စိတ် မရှိတော့ ။မသင့်တော်မှန်းတော့သိပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အထိ ၊အတွေ့က မိန်းမူးစရာ ပါရှင်'
မောင်ခိုင့်အလိုကိုလိုက်ရသလိုလိုနှင့် ငြိမ်ခံနေပေမယ့်ရှက်လို့ မျက်လုံးလေးမှိတ်ခါ.......
''အို..မောင်ခိုင် အရမ်းမကိုင်နဲ့လေ ၊အသာလေးပွတ်။နို့သီးခေါင်းလေးကို ရွရွလေးပွတ် အင်း..အင်း.....''. မထွေးမှာသူ့အမေနှင့် မောင်ခိုင့်အဖေတို့သံဝါသပြုကြသည်ကို အခွင့်အရေးရလျှင် ရသလိုချောင်းကြည့်ဘူးထား သဖြင့် နားလည်သည်။ သွေးသားသောင်းကျန်းကာစအရွယ် ကာမစည်းစိမ်တွင် ယစ်မောလို့..အရှက်တရား ကင်းမဲ့သွားလေတော့သည်။မောင်ခိုင့်ခေါင်းကိုဆွဲပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတင်းတောင်လာသော သူ့နို့ကို စုပ်ခိုင်းလိုက်ရာ ''အိုး..အား..အင်း..အင်း'' မထင်နိုင်လောက်အောင်ပင်။ကောင်းလိုက်တာ ။ ''လျှာကလေးနဲ့ထိုးပြီးနို့တအုံလုံးကိုငုံပြီးစုပ် အဟင့် ..ဟင့်....စုပ် စ်အိုး....ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲ ငါသေတော့မယ် အား..အား''ခံကောင်းလွန်းသဖြင့်အဖုတ်ကလေးထဲတွင် စောက်ရည်လေးများ ရွှဲရွှဲစိုကာ ပေါင်ကြားထဲတွင် စီးကပ်လို့လာပါတော့သည်။လူပျိုရိုင်းလေးမှာ နို့လေးနှစ်လုံးကိုသာ ပယ်ပယ်နယ်နယ် စုပ်နေလေရာ အားမရနိုင်။
မောင်ခိုင့်လက်ကို မသိမသာကိုင်ပြီး ပေါက်ကာစမွှေးညှင်းနုလေးများရှိရာဆီးခုံပေါ်သို့ တင်ပေးလိုက်ရာ ။လူပျို့လက် ဝက်မြီး-ရမ်းပါလေတော့သည်။ခုတော့လည်း..
''အဲတာတော့ မလုပ်နဲ့ဟယ်။အို..မလုပ်ပါနဲ့ဆို ။ ငါပြောနေတယ်''
ထွေးမြ ပါးစပ်ဖြင့်တားဆီးနေသော်လည်း အသာဖြဲပေးလိုက်သောအခါ စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကြားမှ စောက်စိလေး ခေါင်းထောင်ထနေသည်ကို မောင်ခိုင်တွေ့လိုက်ရသည်။အောက်ကိုလျှောချပြီး စာအုပ်ထဲက အတိုင်းလျှာဖြင့် စောက်ဖုတ်လေးကိုတပြင်လုံးလျှက်လိုက်သော်..
''အား..အမေ့..အိုး.''တစ်ချက်ဆွဲလျှက်တိုင်း ပေါင်တွင်းကြောသာ မက၊....တကိုယ်လုံးရှိအကြာပေါင်းစုံ တင်းတောင့်သွားအောင်းပင် အလူးအလဲခံနေရသည်။ဖင်ကိုကော့ကော့ပြီး ပေးလိုက်တိုင်း အဖိုဆို၊ယင်ဖိုတောင်မ သမ်းဖူးသေးသော အဖုတ်ကလေး၏ကျဲကျဲပါးပါးပေါက်နေသောမွှေးညင်းနုကလေးများ အရင်းတွင် ကြက်သီးအဖုကလေးထကာ ဖူးဖူးလုံးလုံးကလေးမှ ဖေါင်းဖေါင်းကားကားကြီး ဖြစ်လာသည် ကို တွေ့ရသည်။ ထိုမျှမက ဖင်အဝသို့တိုင်အောင်စီးကျလာသောစောက်ရည်အနံ့များကြောင့် လူပျိုရိုင်းမောင်ခိုင် နသိုးကြိုးပြတ် တရှူးရှူး၊အသက်ရှူသံများပြင်းလာလေသည်။ကြမ်းကြမ်း၊ရမ်းရမ်း တက်ခွကာ ပေါင်ကြားထဲသို့ သူ့လီးကို ထိုးထည့်ပြီးအတင်းစောင့်တော့သည်။စောက်ခေါင်းလေးထဲမဟုတ်ဘဲ အပေါက်နှင့်တလွဲ။
''အို..အာ ဘာလုပ်နေတာ၊အင်း..အင်း အပေါက်ထဲကိုထည့်လေ'' ခွေးကောင်လေး လိုးချင်လိုက်တာကလည်း ပြာလို့ ၊ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူး။ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုပိုဖြဲလိုက်ကာ မောင်ထွေးလီးကိုလှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး ခံချင်လွန်းလို့ ပွစ၊ပွစိတောင်ဖြစ်နေသောသူမ၏စောက်ခေါင်းတွင် တေ့ထောက်ပေးလိုက်သည်။
''အမေ့ အ...အ......အား အိုး.'' ကိုယ်ဖေါ်သည့်ဆေး ကိုယ်မစားနိုင်တော့။ မရှူနိုင်၊ မကယ်နိုင်ဖြစ်ရပြီ။
စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကိုထိုးခွဲပြီးဝင်သွားရာလီးတံတစ်ဝက်ခန့်ဝင်သွားသောအခါ ထစ်ကနဲတစ်အားအောင့််သွားပြီး နာသည်။မညှာ၊မတာ ဆက်ထိုးသွင်းလိုက်သောအခါ ပူကနဲနှင့် လီတံအရင်းတိုင်အောင် ဗြိကနဲ ဝင်သွားသည်။ နာကျင်လွန်းသဖြင့် မောင်ခိုင့်ရင်ဘတ်အားအတင်းတွန်းကာ 'အမေ့'ဟုပင် အော်လိုက်မိသည်။မရပ်။ဖင်ကြီးကို မြှောက်မြှောက်ပြီး ဆောင့်လီုးတော့သည်။
''ဗြွတ်..ဗြွတ် ဖတ်..'' ဂွေးလပြွတ်ကြီး ဖင်စအိုကို တဖတ်ဖတ်နှင့်ရိုက်မိသည့်တိုင်အောင် အားရ၊ပါးရဆောင့်ဆောင့်လိုးရင်းမှပင် တဖြည်းဖြည်းစောက်ရည်များလှိုင်လှိုင်ပြန်ထွက်လာပြီး ။
''အင့်..အင့် ဟင်း.. ဟင်း အိုး ..ကောင်းလိုက်တာ မောင်ခိုင်ရယ်။ စောင့်..စောင့် မညှာနဲ့၊ငါ့ဟာလေးကွဲချင် ကွဲသွားပါစေ အား..အားး''
လူပျိုရိုင်းကလေး၏အဆောင့်အညှောင့်များကြောင့် ကာမပင်လယ်ကြော နစ်မြောနေရင်း၊တစ်ကိုယ်လုံး အကြောများတင်းကာ ..
''အင်း..အင်း..ဗြွတ်.ပလွတ် '' မောင်ခိုင့်ကို တအားဆွဲဖက်လိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးထစ်ကြီးကိုဖျစ်ညှစ် စုပ်လိုက်ရင်းစောက်ရည်များထွက်ကာပြီးသွားရာ မောင်ခိုင်မှာလည်း ဖင်စအိုဝရှုံ့ကနဲဖြစ်သွားပြီး တဖျောဖျောနှင့်လီးရည်များ ထွက်သွားလေတော့သည်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေ့ဖက်တွယ်ကာ ကာမဇောကြောင့်မောခဲ့ရသည်ကို အနားယူနေကြရာမှ..
''နင်တော်တော်ဆိုးတယ် ငါ့ကိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်တယ် ဟင့် ဟင့် ..'' ပြောပြောဆိုဆိုပင် မောင်ခိုင်အား ကိုယ်ပေါ်မှ တွန်းချလိုက်သည်။မထွေး၏ရှိုက်သံများကြောင့် ဘာလုပ်ရ ဘာကိုင်ရမယ်မှန်းမသိတော့ ၊မထွေးမျက်နှာကို မကြည့်ရဲတော့ဘဲ ဆတ်ကနဲထပြီး မထွေးကိုကျောခိုင်းကာ ငူငူကြီးထိုင်နေတော့သည်။
မထွေးကိုယ်တိုင်မှာလည်း မျက်ရည်များကို မသုတ်အားသေးဘဲ ဘရာစီယာနှင့်အင်္ကျီကို ပြန်ဝတ်ပြီး ဖင်ပြောင်ကြီးနှင့်ပဲ ထလိုက်သည်။ နုံးချိနေသဖြင့် ချက်ချင်း ထမရ။ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရင်း ထမီကိုလှန်းဆွဲယူလိုက်သောအခါ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးရည်များ တဘွတ်ဘွတ်လေအံသံနှင့်အတူ စီးထွက်ကျလာ လေတော့သည်။' ငါ မှားသွားပြီလား 'ဟု တဟင့်ဟင့်ရှိုက်ရင်းမှ သူ့ပေါင်ကြားထဲသို့ငုံ့ကြည့်လိုရာ အရင်ကလိုစေ့မနေဘဲ စောက်ဖုတ်လေးနှစ်ခြမ်းမှာ ပြဲအာအာလေးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်။
ခေါင်းမှာစည်းထားသောလက်ကိုင်ပုဝါကိုဖြုတ်ယူလိုက်ကာ မောင်ခိုင့်ကျောကုန်းကို ထုလိုက်ပြီး..
မျက်ရည်များကြားမှ မောင်ခိုင့်ပေါင်ကြားထဲမှ ပျော့မာမာကြီးဖြင့်တောင်နေဆဲလီးကိုကြည့်ရင်း မောင်ခိုင့်ဘက်သို့လှည့်ကာ ၊ပြဲအာအာ စောက်ဖုတ်ကလေးကိုဖြဲပေးပြီး သုတ်ခိုင်းလိုက်လေတော့သတည်း။
မထွေးအမေ မထားခင်မှာအသက် ၃၈နှစ်သာရှိသေးသော်လည်း လင်သုံးယောက်ရှိပြီ။ယခု မောင်ခိုင့်ဖေက နောက်ဆုံး။အပျိုဖြစ်စအရွယ်ကပင် မျှစ်စို့ပေါက်ကြီးလို ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က၊ တတုံးတခဲနှင့်မို့ လက်သွက်သော မထွေးရဲ့အဖေနှင့်သမီးရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။ရည်းစားဦးမို့ အသဲနင့်အောင်ချစ်ရသည်။တစ်ကိုယ် လုံးပုံအပ်ခဲ့သည်။ကောက်ရိုးပုံဘေးတွင် သွားသွားချိန်းတွေ့ပြီး အလိုးခံနေရာ လီးအရသာကို ကောင်းကောင်း သိသည်။ အမြဲတမ်း ညဖြစ်စေချင်သည်။ညမိုးချုပ်ပြီဆိုယင်ဖြင့် ကာမစည်းစိမ်ကို ခံစားရတော့မည်။ပေါင်လုံး တုတ်တုတ်ခွဆုံက ဟာကရွစိ၊ရွစိဖြစ်လာပြီး မနေနိုင်တော့။လူကြီးတွေလစ်ပြီ၊အိပ်ပြီ ဆိုယင်သွားအလိုးခံ တော့သည်။သောက်လေ သောက်လေငတ်မပြေ ဆိုကြသည့်အတိုင်း အခွင့်အရေးရလျှင်ရသလိုနေ့ခင်းဘက် တောင်မရှောင် အကောင်းကြီးကောင်းနေကြရာ၊တစ်နေ့တော့ထားခင်မှာ ဗိုက်ကြီးသွားတော့သည်။
ထားခင်တို့ရွာမှာတော့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ရွာက လင်မယားတွေလိုက်မေးကြည့်။
''စာအုရေ..'' ''ဟေ ''
''အေး'' ဆိုပြီးညား၊ကလေးတွေမွေး မထူးဆန်းပါ။ကံဆိုးသူ ထားခင်လေးကတော့ လင်နောက်လိုက်မည့်ညမှာပင် မုဆိုးမဖြစ်သွားရလေသည်။ထားခင်ကိုလာခိုးစဉ် လမ်းမှာမထွေအဖေမြွေကိုက်ခံရပြီး ဆုံးသွားခဲ့သည်။ သမီးရည်းစားမက လင်မယားလိုနေခဲ့ကြတာဆိုတော့ အလူးအလိမ့်ခံစားလိုက်ရသည်။ အချစ်ဇါတ်လမ်း တခန်းရပ်ပြီပေါ့ရှင်တို့ရယ်။
ထားခင်ဗိုက်ကတော့ရပ်ထားလို့မရ။တနေ့တခြားပူလာပြီ။လူကြီးတွေမှာ စိတ်တွေလည်းဆိုး၊ဘာလုပ်ကျမလဲ။ နောက်ဆုံးမတော့ အိမ်မှသူရင်းငှါးမောင်ထုံကြီးကိုဘဲ လှည်းကြိုးထမ်းခိုင်းလိုက်သည်။ ထားခင်မှာ အရင်ကဆိုယင် သည်ကောင်ကြီးကိုဆေးဖေါ်ကြောဘက်တောင်မလုပ်ပေမယ့်..ခုတော့လင်တော်ဖို့ ခေါင်းငြိမ့် လိုက်သည်။ လီးပါယင်ပြီးရော တစ်ချက်ခုတ်၊နှစ်ချက်ပြတ်။ဝမ်းဆွဲသည်အကြီးသောင်းပြောသလို မိန်းမတွေဟာကိုယ်ဝန် ရှိစအချိန်မှာ ပိုပြီးအလိုးခံချင်၊အလိုးခံလို့ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာဟုတ်များနေသလားပဲ။ အကိုနဲ့နှစ်ယောက်သား ချိန်းတွေ့ကြတိုင်းတွေ့ကြုံရတဲ့ အထိအတွေ့လေးတွေပြန်သတိရမိတိုင်း စောက်ဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေရွဲလို့ ခံချင်လိုက်တာအကိုရယ်။ကျမကို မိန်းမူးအောင် ကိုင်တွယ်တတ်တဲ့အကို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့အပွတ်၊အသတ် အချော့၊အမြူတွေ ပြီးတော့ ပြီးတော့သူ့ဟာကြီးနဲ့ထိုးထိုးထည့်ပြီး အို..အကိုရယ် သူများကိုစွဲလမ်းအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးမှ ထာရစ်ခဲ့တယ်။အကို ခဏခဏကိုင်ခိုင်းတဲ့ ပူနွေးနွေး ပျော့မာမာကြီးကို ပေးမကိုင်ခိုင်းတော့ဘူးလားရှင်။
ညဘက်ရောက်ပြီဆိုယင်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ကလေးကို ကိုင်ပြီးလွမ်းရသည်။
အင်း ..မောင်ထုံကြီးနဲ့ဆိုယင်တော့သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ တက်ဖိယင် .........အို..အမလေး အသဲယားစရာ၊ ထားခင်ရင်တွေတုန်ရုံမက ဖင်ပါတုန်လာတော့သည်။
သည်လိုနှင့်ပင် မောင်ထုံကြီးအတွက်တော့ မင်္ဂလာဦးညပေါ့..
အိပ်ယာပေါ်ရောက်ကြတယ်ဆိုယင်ဘဲ ဘာမှမပြော ထမီကိုလှန်ပြီးတက်လိုးတော့သည်။ ထားခင်မှာလည်း လီးနှင့်မတွေ့ရတာကြာပြီဆိုတော့ ရင်တဖိုဖိုနှင့်။ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲပေး ခံနေလိုက်သည်။ လူကောင်ထွားသလောက် တစ်အားဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့ ခံကောင်းကောင်းနှင့် ကော့ပြီးညှစ်ပေးလိုက်ရာ လီးရည်ပူပူများပန်းထည့်ခံလိုက်ရသည်။ ပြီးတယ်ဆိုယင်ဘဲ လီးကိုဆွဲချွတ်ကာတစ်ဘက်သို့လှည့်ပြီး တခေါခေါနှင့်ဟောက်များတောင်ဟောက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားလေသည်။
ထားခင်တစ်ယောက်မှာသာ ဆန့်တငံ့ငံ့နှင့် အိပ်လို့မရတော့။ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဘဲလက်နှင့်လုပ်ကြည့်သည်။ အာသာမပြေနိုင် စိတ်တွေတိုလာသည်။မောင်ထုံကြီးမျက်နှာကို ကုတ်ဖဲ့ချင်စိတ်များ မနည်းထိမ်းထားရသည်။ အလကားနွား၊သောက်သုံးမကျဘူး။
သည်လိုဖြင့်ပေါင်းသင်းလာခဲ့ရာ နေ့မှ လသို့ကူးပြောင်းလို့လာခဲ့ပေပြီ။ညစဉ်ပင် အလိုမပြည့်၊ဟာတာတာ ကြီးသာအမြဲကျန်ခဲ့ရသောအဖြစ်ကို ထားခင်ဆက်သီးမခံနိုင်တော့။မထွေးလေးကိုမွေးပြီးနောက် ထားခင် တစ်ယောက်ခေါင်းရင်းအိမ်မှ လူပျိုပေါက်ကလေးကိုမြှူဆွယ်ပြီး အလိုးခံတော့သည်။ သူလည်းမထူး။ လူကိုမြင်သည်နှင့် လီးကတောင်နေပြီ။ပြီးတော့ ဘတ်ဘတ်နှင့်တက်လိုးကာ ခဏနှင့်ပြီးသွားသည်။ သူလည်းမထူး။
အခုတော့ အကို့ကိုပိုပြီးသတိရသည်။ထားခင် မမေ့ဘူး..တစ်ခါကဆိုယင် ထားခင်ကို ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ခိုင်းပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ဖွဖွလေးနေရာအနှံ့နမ်းပြီး ထားခင်စိတ်တွေအအားကြွလာမှ နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုတလှည့်ဆီ လျှာဖျားလေးနဲ့ကလိလိုက် နို့အုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုငုံစုပ်လိုက်လုပ်ရင်း တစ်ချက်ချင်း သွင်းလိုက်/ထုတ်လိုက်လိုးခဲ့တာ ထားခင်လေဘယ်နှစ်တောင် ပြီးသွားမှန်းမသိပါဘူး အကိုရယ်။
အကိုပြီးသွားတော့ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ပန်းထည့်လိုက်အကို့ရဲ့လီးရည်တွေ ထားခင်သားအိမ်ဝကိုပူကနဲ ပူကနဲ လာထိတဲ့အချိန် ထားခင်အသဲတွေ အူတွေဗြောင်းဆန်သွားအောင် ထားခင်လည်းပြီးသွားတော့ ရှိသမျှစောက်ရည် တွေထွက်ကုန်ပြီးအကိုရယ်..တကိုယ်လုံးလှုပ်မရအောင်နျုံးခည့်သွားတော့ ထားခင်မေ့မျောသွားတယ်ထင်ပြီး အကို့လီးကြီးတန်းလန်းနဲ့ပဲနား နားကိုကပ်ပြီး ထားလေး..ထားလေးလို့အကိုစိုးရိမ်တကြီးခေါ်ခဲ့ရသေးတယ်နော်။
ခုတော့..ထားခင် ဖင်သရမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးအကိုရယ်။ အကို့လို ကြင်နာပေးနိုင်မဲ့သူ ရှာနေတာပါ။ ဟိုနှစ်ကောင်ကလည်း လီးတထောင်ထောင်နဲ့ အလကားပါဘဲအကိုရယ်။
သည်လိုဖြင့် ထားခင်၊ ခုတော့ မထားခင်ပေါ့။ပဲအရောင်းအဝယ်/စပါးအရောင်းအဝယ်လုပ်မည်ဆိုပြီး ခြေဆန့်တော့သည်။' မထားခင် ဖင်ခံသည် ' ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ် မဆွဲရုံတမယ်။ လူပျို၊အိမ်ထောင်သည်၊တခုလတ်၊နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးလူထွက်ပါမကျန်အိုစုံလို့။ နောက်ဆုံးမောင်ခိုင့် အဖေမုဆိုးဖိုနှင့်တွေ့တော့သည်။အသက်က ရှစ်နှစ်လောက်ကွာပေမယ့် အားကောင်းမောင်းသန် သန်မာဖြတ်လတ် တုန်း။ပြီးတော့ မိန်းမကျမ်းကြေသည်။
အကိုကြီးကို မထားခင်ချစ်သည်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ လီးထွားထွားကြီးကိုလည်းစွဲသည်။မထားခင်ကြုံဘူးသမျှတွင် လုံးပတ်ရောအရှည်ပါ သူများတွေနှင့်မတူအောင်ကို ကြီးလွန်းလှသည်။ထားခင် ဘဝတွင်ကာမအလို မပြည့်ခဲ့ သမျှ ကျေးဇူးရှင်အကိုကြီးကြောင့် မထားခင် ဘဝတွင်လောကစည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝ ခံစားနေရလေပြီ။ သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေ။ အကိုကြီးရဲ့ အကိုင်အတွယ်/ချော့မြူမှုတွေအောက်မှာ .......
တခါတရံ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးကိုထောင်ပြီး ကဲကြသည့်အခါ လီးကြီးမှာကြီးလွန်းသဖြင့် ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်း စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေပါ လိပ်လိပ်ပြီးပါလာသည်ကိုကြည့်ပြီး ခံရသည့်အရသာ၊ အို..နတ်စည်းစိမ်နဲ့တောင် မလဲနိုင်ပေါင်ရှင်။
တီဗီ ကိုကြည့်နေသော်လည်း စိတ်က မပါ။ မောင်ခိုင်တစ်ယောက် အရူးကို အမဲသားကျွေးမိသလိုဖြစ်နေသည်။
နေ့ခင်းက တစ်ခါလိုးလိုက်ရသည်ကို အားမရသေး။စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းအိအိလေးကို မျက်စေ့ထဲက
မထွက်တော့။ယခုပင် စောက်ဖုတ်လေးကုန်းလျှက်တုန်းက ရတဲ့ အဖုတ်နံ့ကိုရလာသလိုလို – ပုဆိုးအောက်မှ
လီးက ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်လာသည်။ 'အင်း မထွေးကလည်း အိမ်ပြန်ရောက်ကတည်းက ခေါင်းကိုက်လို့ဆိုပြီး ဝင်သွားတာ ခုချိန်ုထိ ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူး ဘာတွေများ လုပ်နေလဲ အဖေ့ကို
ပြန်တိုင်ယင်တော့ သွားပြီ။ ဟာ.....သူကိုယ်တိုင် ကျေကျေနပ်နပ် ခံတာဘဲ...
တောက်.....အဖေတို့ကလည်း ခုချိန်ထိ မအိပ်ကြသေးဘူး..အဖေတို့ အပေါ်တက်အိပ်တော့မှ ငါ..အားရပါးရ
''ဟဲ့ မောင်ခိုင် မျက်နှာကြီးနီလို့ နေကောင်းရဲ့လားကွယ်'' မထွေးအမေက နှဖူးကိုစမ်းယင်း မေးလိုက်သည်။
''ကောင်း ပါတယ် အမေရဲ့ .....နေပူထဲသွားထားလို့ပါ''
''ဟေး..ဘယ်သူတွေလဲကွ..ဝင်လာခဲ့လေ......ဟော မောင်သက်တို့ပါလား ညကြီးမိုးချုပ်.....''
''ဟုတ်ကဲ့ ဦး..မောင်ခိုင်ကို လာခေါ်တာ ကိုချစ်ခိုင်ကြီးပြန်ရောက်နေလို့အဲတာသီချင်းသွားနားထောင်မလို့
''အေး အေး ခေါ်သွားလေ..ညဉ့်မနက်ကြနဲ့နော်''
မောင်ခိုင် စိတ်ညစ်သွားသည်။'တီဗီ ပြီးဖို့ နာရီဝက်လောက်ဘဲ လိုတော့တာ။ ပြီးတာနဲ့ အဖေတို့လည်း
အိမ်ပေါ်တက် ..ငါလည်း မထွေပေါ်တက် ' -''ငါ မလိုက် တော့ပါဘူးကွာ''
''အေးပါကွာ လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်..'' ခွေးမသားတွေ သောက်လိုက်ကန်းဆိုးမသိဘူး။ နေနှင့်ဦးပေါ့ မထွေးရေ ပြန်လာတော့မှ အသကုန်....
''အေးပါ ကွာ..ခဏလောက် နားပါရစေဦး....ငါ မြို့ကယူလာတဲ့ အာမီရမ် နဲနဲမော့လိုက်အုံးမယ် မင်းတို့လည်း
နဲနဲဆီ ချပေါ့'' ပြောပြောဆိုဆို မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်သွားသည်။
''ဟာ သောက် ခွဘဲ..အမြည်းမရှိဘူး - လာကွာ ကြက်သွားခိုးရအောင် ''
''ငါ သိပါတယ်ကွ.ငါလုပ်နေကျပါ....တို့ရွာ တောင်ပိုင်းကဝက်မွေးတဲ့ တရုတ်လင်မယား ခုလောက်ဆို ကောင်း
ကောင်းတွယ်ပြီး မောလို့ အိပ်နေလောက်ပြီ -မောင်ခိုင် ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ ..ဟို နှစ်ကောင် ငြုပ်သီးရှာပြီးထောင်း
ထားနှင့် အသံမထွက်စေနဲ့ ''
သူ့ကိုမှ ရွေးခေါ်တယ်ဆိုတော့ မောင်ခိုင် ဘဝင်ခိုက် သွားသည်။'ငါ့ကို ကာလသားအရာ သွင်းပြီပေါ့ အေးလေ ဘာဘာညာညာ ဟိုဟာတောင် လုပ်တတ်/လုပ်ပြီးနေပြီဆိုတော့ ..ဟီ ဟိ'
''လာ ဟေ့ကောင် ငိုင် တိုင်တိုင်နဲ့ ဘာလဲကြောက်နေလား ''
''မဟုတ်ပါဘူးဗျ'' ''ပုဆိုးအပို တစ်ထည်ယူခဲ့ကွာ အပြန်ကျ ကြက်ထည့်ရအောင်''
''သူ့ကိုမှ ချစ်မိနေပါတယ်....တွေ့နေမြင်နေကျမို့ ဖြေဖျောက်ဖို့လည်း မလွယ်...မျက်စေ့ထဲ တဝဲလည်လည်..''
''ဟာ ဟိတ်ကောင် ကြက်ခိုးထွက်ပါတယ်ဆိုမှ သီချင်းတကြော်ကြော်နဲ့''''ပျော်လို့ပါ ဗျ''
''လာလာ လူလစ်ရင် ခြံဘေးပြေးကပ်ရအောင် သရက်ပင်တွေအောက်အမှောင်ခိုပြီး ဝက်စာထားတဲ့ တဲဘေးမှာငြိမ်ငြိမ်နေပြီးအခြေအနေကြည့်ရမယ်'' ''တဲ ထဲမှာ သူတို့အလုပ်သမားကိုတာတေကြီးအိပ်တာဗျ''
''ခုလောက်ဆို မင်းကောင် တရုတ်မကြီးပေးတဲ့ ဆေးအရက်တွေသောက်ပြီး မှောက်နေလောက်ပြီ''
တဲဘေးသို့ ကပ်လိုက်ရာ ''ရှူး..အထဲက တချွတ်ချွတ်နဲ့ ....ဟာ ခွေးမသား ဂွင်းထုနေတာလား မသိဘူး'' မှောင်ရိပ်ခိုပြီး တဲထဲသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်ကြသည်။ ကိုတာတေကြီးသည် နောက်ဆုံးလက်ကျန် အရက်ခွက်ကို မော့ချလိုက်ပြီး သူ့ခေါင်းအုံးအောက်မှ ပင်နယ်စလင်ပုလင်းကဲ့သို့ ပုလင်းကလေးတစ်လုံးကိုနှိုက်ယူလိုက်ပြီး လက်ဖဝါးပေါ်သို့ ဂရုတစိုက်လောင်းချလိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့နောက် ပက်လက်လှန်အိပ်ချလိုက်ရာ သူ့လီးကြီးမှာ မိုးပေါ်သို့တည့်တည့်ထောင်မတ်နေလေသည်။သူ့လီးကြီးကို အရင်းမှအဖျားတိုင်အောင် လီးထစ်ကြီးပါမကျန် သုတ်လိမ်းကာ တဖြည်းဖြည်းဆွဲပေးနေသည်။မောင်ခိုင်မှာ သူဂွင်းတိုက်သလိုမျိုးမဟုတ်သောကြောင့် နည်းသစ်တော့ရပြီဟု ဂရုတစိုက်ကြည့်နေလေသည်။ သိပ်မကြာလိုက် မျက်စေ့အောက်မှာပင် အရှည်ကတော့သည်လောက်မဟုတ် လုံးပတ်မှာ နကိုကထက် နှစ်ဆ လောက်ကြီးထွားလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ အထူးခြားဆုံးမှာ လီးထစ်ကြီးပင်။ မှိုပွင့်ကြီးအလား ကားထွက်လို့။လရောင်အောက်တွင် အဆီတဝင်းဝင်း နှင့် မိန်းမတွေတော့မပြောနှင့် မောင်ခိုင်တောင် အသဲယားချင်စရာ။
ကိုချစ်ခိုင်လက်ကုတ်လိုက်သောကြောင့် လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ နှုတ်ခမ်းကိုလက်ညှိုးကပ်ပြပြီး အိမ်မကြီးဘက်မေးငေါ့ပြသည်။ တရုတ်မ ဝဝတုတ်တုတ်ကြီး ထမီကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်လှန်မပြီး အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
တရုတ်မကြီးမှာ ဘေးဘီကိုမကြည့် မောင်ခိုင်တို့ရှိရာတဲဘက်သို့လာလေသည်။မောင်ခိုင်မှာ အသက်ပင် မရှူမိဘဲ တရုတ်မပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးခွဆုံမှ စောက်မွှေးများနှင့်မဲနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကိုသာ အငမ်းမရပြူးပြဲပြီး ကြည့်နေတော့သည်။
''မောင်လေး မောင်လေး ''
''အေးပါဟဲ့.. မသာကြီးက ဇိမ်ခံပြီးလိုးနေတော့ အခုမှပြီးတယ်''
''ဘယ်လောက်ကြာကြာ သူ့လီးသေးသေးလေးနဲ့ဆိုတော့ စောက်ဖုတ်ယားပြီး ကျန်ခဲ့တာဘဲ''
တရုတ်မကြီးသည် လှန်မထားသောထမီကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး ကိုတာတေကြိးအိပ်နေသော ကွပ်ပစ်(ကုတင်)ပေါ် လှမ်းတက်လိုက်သည်။လီးကြီးကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်ပြီးစောင့်နေသောကိုတာတေကြီးမှာ အငမ်းမရပင် တရုတ်မကြီးကို ဆွဲလှဲချလိုက်ပြီး ပေါင်ဖြူဖြူတုတ်တုတ်ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲဖြဲလိုက်သည်။
''ဟာ.. လီးရည်တွေ ရွှဲနစ်နေတာဘဲ ခြေသလုံးထိရောက်အောင် စီးကျလို့ပါလား''
''မသာကြီးက လီးတံတာသေးတာ လီးရည်များတယ်ဟဲ့..သူပြီးသွားတော့ ငါ့ဗိုက်ထဲမှာ သူ့ဟာတွေ ပြည့်သွားတာဘဲ....ပူနွေးနွေးကြီးနဲ့ ငါ့ဟာကြီးပိုပိုရွလာတယ်ကွယ်..မြန်မြန်သာလိုးပါတော့မောင်လေးရယ် မောင်လေးရဲ့လီးကြီးနဲ့အလိုးခံချင်လှပြီ''
တာတေကြီးမှာ စောက်မွှေးမဲမဲလိမ်လိမ်ကောက်ကောက်များဖြင့် ဖုံးနေသောစောက်ဖုတ်ကြီးကိုငုံ့ကြည့်ရင်း ဘာကိုစိတ်ကူးပေါက်သည်မသိနှုတ်ခမ်းထူထူစောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကိုလက်ဖြင့်ဆွဲဖြဲလိုက်လေသည်။
ပြူးတောင်ပြီးထွက်နေသော စောက်စေ့နီနီကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့်တေ့ပြီး စုပ်လိုက်ရာ ...
တရုပ်မကြီးမှာ အသံများပင်ထွက်အောင်ငြီးငြူရင်း ဖင်ကြီးကော့တက်လာသည်။ စောက်ရည်များသာမက သားအိမ်ထဲထိအောင်ရောက်နေသော တရုတ်ကြီး၏လီးရည်များပါ ပြန်ထွက်လာလေသည်။ တာတေကြီးသည် လျှာအပြားလိုက်ကြီးဖြင့် ပြန်လည်စိမ့်ထွက်လာသော လီးရည်များပါမကျန် စောက်ဖုတ်တပြင်လုံး ကိုလျှက်ချလိုက်/ စောက်စေ့ကလေးကိုငုံစုပ်လိုက်/ပေါင်တွင်းသားလေးများကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖွဖွကလေးထိလိုက် ဖြင့်ပညာကုန်ထုတ်သုံးနေသေည်။
တရုတ်မကြီးမှာ အသံများပင်ထွက်အောင်ငြီးငြူယင်း ဖင်ကြီးကိုကော့ကော့ပေးနေသည်။
''စုပ်..စုပ်......အိုး.စောက်စေ့လေးကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိပြီးစုပ်..အား..အား..'' တရုတ်မကြီးလက်နှစ်ဘက်က တာတေကြီးခေါင်းကိုဆွဲကိုင်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ပေါ် အတင်းပင်ဖိကပ်ထားသည်။
''အမယ်လေး..ကောင်းလိုက်တာ..မောင်လေးရယ်'' ''ပြွတ်ပြွတ်.. '' ''မမ မနေနိုင်တော့ဘူး..အင်း..အိုး........
မောင်လေးလီးကြီးနဲ့ တအားလိုးတော့ပေးပါတော့ ..အင်း..အင်း......''
တာတေကြီးလည်း အခါတိုင်းနှင့်မတူ သည်တစ်ခါဖြစ်ပေါ်သည့် ကာမစိတ်မှာ အရမ်းပင်ပြင်းထန်းလွန်းသည်
ဗရမ်းဗတာ ။ဆေးလူးထားသောလီးကြီးမှာ ပေါက်ကွဲထွက်တော့မည့်အလား တင်းတောင်နေသည်။
''မမ..ယောကျာ်းကြီးနဲ့ ဘယ်လိုအလိုးခံခဲ့တာလဲ ဟင်''
''ကဲ..အဲတာဆိုယင် ကျနော့ကို ဖင်ကုန်းပြီးအလိုးခံ'' ''သိပ်ကဲတာဘဲ..မောင့်လေးသဘော..မောင့်သဘော..''
တရုတ်မကြီးလေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်ကုန်းလိုက်ရာ ကြီးမားသောတင်ပါးကြီးနှစ်ခုကြား ပေါင်ခွစုံ မှစောက်ဖုတ်ကြီးမှာအနောက်သို့ပြူးထွက်လာတော့သည်။တာတေကြီးလည်း အဆီတဝင်းဝင်းဖြင့် ပြောင်လက်နေသောလီးမဲမဲကြီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ဖွေးဖွေးကြီး၏ ဆူထွက်နေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူကြီး ၂ –ခြမ်းကြားထဲသို့ မှိုပွင့်ကြီးအလားကားထွက်နေသောလထစ်ကြီးကို သွင်းပြီး စောက်ခေါင်းအဝကိုတေ့ထောက်လိုက်သည်။ထို့နောက် တင်ပါးဆုံကြီးကိုဆွဲကိုင်လိုက်ပြီး (လူနာအား အကြောဆေးများထိုးသကဲ့သို့ ) သူ့လီးကြီးတစ်ဆုံးထိဝင်သွားသည့်တိုင်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။
'ဗြိ.....ကနဲဆို..စောက်ဖုတ်ထဲတွင် တရုတ်ကြီး၏လီးရည်များနှင့် စောက်ရည်များဖြင့်ချောဆီကဲ့သို့ဖြစ်နေရာ စီးစီးကြပ်ကြပ်ကြီး တထစ်ထစ်နှင့် ဝင်သွားသည်။
'' ကောင်းလိုက်တာ..မောင်လေးရယ် စောက်ဖုတ်ကြီးကိုပြည့်ကြပ်ပြီး .....အို..မောင်လေး..ရပ် မထားနဲ့လေ ဆောင့်..အင်းကောင်းလိုက်တာ ..အား..အင်း..အင်း လိုး.... လိုး..လပြွတ်ကြီးပါဝင်သွားအောင်ကို ဆောင့်ချလိုက်..အိုး..အား.. အား...''
တရုတ်အဖိုးကြီး အတွက် တရုတ်ဆေးမြစ်တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ ကြက်ပေါင်းတွေ/ ဂျင်ဆင်းဆေးအရက်တွေ ပေးကျွေးပြီး အားမွေးထားတဲ့ တာတေကြီးတစ်ယောက် တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို စုံကိုင်ပြီး တဖတ်ဖတ်နှင့်အာရပါးရ စောင့်လိုးနေပါတော့သည်။ သိပ်မကြာ အချက် ၂ဝ –ခန့်ဆောင့်ပြီးသောအခါ တရုတ်မမို့ စောက်ရည် တရွှဲရွှဲနှင့် ။ လီးကိုလီးထစ်ဖျားထိဆွဲထုတ်ပြီး အရင်းခိုက်သည်အထိ ဆောင့်ဆောင့် လိုးချလိုက်သောအခါ စောက်ခေါင်းထဲလေတွေပြီး..
''ဘွတ်..ဘွတ်.....ဖတ်......ပလွတ်..ဘွတ်''.. စောက်ခေါင်းထဲမှ လေအန်သံများပါ ထွက်လာလေသည်။
''ဟေ့ကောင် ကြည့်ပြီးဖီလင်တက်မနေနဲ့ အချိန်ကောင်းဘဲ ကြက်ခိုးပြီးပြန်ရအောင် သူတို့လောကကြီးကိုမေ့နေပြီ..''
''လာ လာ ပြန်ရအောင်..'' ဘယ်အချိန်ကများ သွားဆွဲလိုက်ပါလိမ့် ကြက်တစ်ကောင်ကို မောင်ခိုင့်အား ထိုးပေးလိုက်သည်။
တရုတ်မကြီးမှာ တာတေကြီးဆောင့်ဆောင့်ပြီး အသကုန်လိုးသောကြောင့် အရှေ့သို့တရွေ့ရွေ့နှင့် နောက်ဆုံ်း နံရံတွင်ခေါင်းစိုက်ပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ်အလိုးခံနေတုန်းပင်။
''အောင်မာ ကောင်လေး မနေနေိုင်တော့ဘူးလား..ငါ့အိမ်က အိမ်သာထဲမှာလဲ ထုလို့ရပါတယ်ကွ ချီးနံ့လေး တသင်းသင်းနဲ့ပေါ့ကွာ..ဟား..ဟား.ဟား''
''ဟာဗျာ..အကိုကြီးကလဲ..အဲ..ကိုတာတေကြီးလူးတာ ဘာတွေလဲဗျ..ချက်ချင်းကြီးကို သူ့ဟာက ထွားလာတာဘဲ'' ''နှမ်းလုံးကြိုင်မြစ်နဲ့နှမ်းဆီစပ်ထားတာကွ။ငါ့မှာတောင်ရှိသေးတယ် ။ဟိုဖက်ရွာက ဆေးဆရာကြီး ဦးတုတ်ကြီးဆီက ငါအနိုင်ကျင့်ထားတာလေ။လူပျိုပေါက်အချိန်ကတည်းစပြီး မှန်မှန်လူးပေးရင် ကိုယ့်ဟာနဲ့ထိလိုက်တဲ့မိန်းမတွေဟာ..ကုတ်နဲ့ကော်ထုတ်တောင် မခွါနိုင်တော့ဘူးဆိုဘဲ''
''ဟုတ်တယ်ကွ..အဲတာ သူ့အတွက်ဘဲသီးသန့်ဖေါ်ထားတာ ။ငါတောင် ကံကောင်းလို့ရတာကွ။တို့ရွာလူကြီးသမီး ကွမ်းတောင်ကိုင်ခင်စိန် အကြောင်းမင်းသိလား''
''သိတာပေါ့..ကျနော်သိပ် အမြင်ကပ်တာ ပိုက်ဆံလည်းရှိ၊ရုပ်ကလည်းချော၊ကိုယ်လုံးကလည်းတောင့်တော့ ဖင်ခေါင်းကျယ်တယ်ဗျ ''
''အေး မင်းတို့ကာလသားပေါက်တွေတော့မပြောနဲ့ ငါတို့တောင် သူ့ဖင်တွေရင်တွေကြည့်ပြီး ဆော်ချင်ကြတာကွ တနေနေ့ခင်းဘက်ကြီး ငါလည်းပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ယုန်ကလေးဘာလေးရလိုရငြားဆိုပြီး ဗိုလ်စိန်ကြီးတောဘက်ကိုသွားတော့ သုတ်သုတ်..သုတ်သုတ်နဲ့ခင်စိန်တောထဲဝင်သွားတာ ငါတွေ့လိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ထဲပဲ အဖေါ်မပါဘူး ။ငါလည်းနှာဘူးထချင်တော့ ကောင်မလေး 'တောထိုင်'သွားတာပဲ ဖင်လှန်ပြီးချီးပါရင် ဖင်လေးတော့ ရှင်းရှင်းပြောရယင် အဖုတ်လေးတော့မြင်ရချည်သေးရဲ့ဆိုပြီး တိတ်တိတ်လေး အနောက်ကနေလိုက်သွားတာပေါ့။ လား..လား ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဦးတုတ်ကြီးပဲပေါ့ကွ သူ့ဟာကြီးကို ဆေးတွေနဲ့လိမ်းပြီး စောင့်နေတာ ။နဲတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာ သူ့လက်ထဲမှာပြည့်လျှံနေတာပဲ မဲမဲတုတ်တုတ်ကြီး ဟေ့ကောင်ရေ။ ငါလည်းအနားသိပ်မကပ်ရဲတာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကပဲ ချောင်းကြည့်နေတာပေါ့ ဘယ်နှစ်ခါတောင်များ တွေ့ပြီး၊ထိပြီးပြီလဲမသိဘူးတစ်ခါထဲဦးတုတ်ကြီးရှေ့ဝင်ထိုင်ပြီး လီးကြီးကို သူ့လက်သွယ်သွယ်လေးနဲ့ လှမ်းကိုင်လိုက်တော့တ်ါဘဲ။ဆေးတွေလိမ်းထားလို့ အဆီတရွှဲရွဲဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကို ဆွဲဆွဲပေးနေလိုက်တာ ငါ့မျက်စေ့ရှေ့တင်ဘဲ ပိုပိုပြီးထွားလာလိုက်တာကွာ ..မြင်းသိုကြီးကျနေတာပဲ။ အမယ်လရည်ကြည်လေးတွေ တစိမ့်တစိမ့်ထွက်နေတဲ့ လထစ်ကြီးကို သူ့လက်ဖဝါးသားနုနုလေးနဲ့ဆုပ်နယ်ပြီး ပွတ်လို့တောင်ပေးနေလိုက်သေးတယ်ကွာ''
''မဟာ နဲ့ကောင်လေးရေ..ဦိးတုတ်ကြိးကလည်းကောင်မလေးရဲ့ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး နောက်က ဘော်လီချိတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ကွာ.....ငါတောင်မှအသက်ရှူမှားသွားတယ်။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ဝင်းမှည့်နေတာပဲ။ နို့ကလေးကတင်းပြီး တော်တော်ကလေးထွားတော့ အောက်ကိုအိအိလေးကျနေတာများ လုံးလုံး တင်းတင်း၊အိအိလေးကွာ..တကယ်ပါဘဲ။ မင်းဦးတုတ်ကြီး နှုတ်ခမ်းမွှေးကားကနဲထောင်သွားပြီး တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ အငမ်းမရကုန်းစုပ်တော့တာပဲ ။ငါလည်းကြည့်ရတာအားမရတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အနားကပ်သွားတာပေါ့ ။ခင်စိန်ကွာ ရုပ်ရည်ကလေးနဲ့မလိုက်ဘူး တော်တော်တဏှာကြီးတဲ့ကောင်မလေး ဦးတုတ်ကြီးခေါင်းကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး သူ့နို့ကိုတစ်လုံးပြီး တစ်လုံးစုပ်ခိုင်းနေလိုက်တာများ တအင်းအင်း.
တဟင်းဟင်းနဲ့ ။သူတို့နှစ်ယောက်က မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေကြတာဆိုတော့ ဦးတုတ်ကြီးက ထမီအောက်လက်ထည့်ပြီးဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲမသိဘူး အို..အင် အဟင့်ဟင့်....ဦးရယ် ဘာရယ်ဖြစ်သွား တော့တာဘဲ။''
''ဘယ်သိမလဲ မွှန်နေကြပြီကိုးကွ ။ခင်စိန်ဆို မျက်လုံးလေးတွေ မှိတ်လို့။ဦးတုတ်ကြီးလက်က ဘယ်နေရာတွေ ဘယ်လိုကလိနေလဲမမြင်ရပေမယ့် ကောင်မလေးဖင်ကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်းကြွတက်လာပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ကွာ။ပြီးလည်း ပြီးရောသူ့လက်ပါအောက်ရောက်သွားပြီး တဖြည်းဖြည်းပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ 'အယ်..ထမီတွေပေကုန်တော့မယ်' ဆိုပြီး ထမီကိုခေါင်းပေါ်ကကျော်ပြီး ချွတ်လိုက်တော့ မနာလိုစရာကွာ ဦးတုတ်ကြီးဟာကြီးက စောက်ဖုတ်ထဲတန်းလန်းကြီးဝင်နေပြီ ဟေ့ကောင်ရေ။ တော်တော်ထန်တဲ့ကောင်မလေးကွာ သူ့ဖင်ဝိုင်းဝိုင်းကြီးကို မြှောက်မြှောက်ပြီးဆောင့်နေလိုက်တာများ ဗြောင်းဆန် နေတာဘဲ။ဗြွတ်..ဗြွတ် ၊ဘလွတ်..ဘလွတ် ၊ပလွတ်..ပြွတ်နဲ့ အသံတွေတောင် ထွက်တယ်။'ကောင်းရဲ့လား..ဟင် သမီးလေး' 'အရမ်း..အရမ်း အင့်..အို. ဗြွတ် ..ဖတ် အား..အင်း.............'။ စကားတောင် ကောင်းကောင်း ပြန်မပြောနိုင်ဘူး ဦးတုတ်ကြီးပခုန်းကို လက်ကလေးနဲ့ဆုပ်ပြီး ဆောင့်ဆောင့် နေလိုက်တာများ အသကုန်ပါကွာ ငါလည်းဘယ်လို ဘယ်လိုစိတ်လွတ်သွားလဲမသိဘူး သူတို့ဘေးကိုရောက်သွားတယ်ကွ။လက်တကမ်းရောက်တော့မှပဲ သူတို့လည်းငါ့ကိုမြင်သွားပြီး ဟင်..ဟာဖြစ်သွား ကြတာပေါ့''
''ဗျာ..ဟင်.....ကိုချစ်ခိုင်ကြီးပါ ဝင်တွယ်တာလား''မောင်ခိုင် ပြူးပြူးပြာပြာဖြင့် မေးလိုက်သည်။
''မဟုတ်ဘူးကွ ပထမတော့ငါလည်းမွှန်ထူနေတော့ သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာ။ငါ့လည်းမြင်ရော ကောင်မလေးက လက်အုပ်တချီချီနဲ့တောင်းပင်္န်တော့တာပဲ ။ပြန်မပြောလိုက်ပါနဲ့ သူ့အဖေသိယင် သတ်လိမ့် ဘာညာပေါ့။မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာ ဝတ်လစ်စလစ်ကြီးနဲ့အောက်မှာလဲလီးတန်းလန်းကြီး။ ငါဘာပြောလို့၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။ပြီးတော့ သူ့ဆွဲကြိုးတွေ၊နားတွေချွတ်ပြီး ယူပါပေါ့''
''အကိုက ယူလိုက်ရောလား''မောင်ခိုင်က အားမလို၊အားမရ ဝင်မေးလိုက်သည်။
''မယူပါဘူးကွာ တော်ကြာငါ့ပါ အမှုပတ်နေမှာပေါ့။မျက်စေ့ထဲမြင်တဲ့ ဆေးပုလင်းလက်ညှုံးထိုးပြလိုက်တော့ ဦးတုတ်ကြီးက ဝမ်းသာအားရနဲ့ ယူပါ၊ယူပါ ကုန်သွားယင်လည်းလာထပ်ယူပါဆိုပြီး မမှီ၊မကမ်း လှမ်းဆွဲလိုက်ရော ဘလွတ်.....်ဆို စောက်ဖုတ်ထဲက လီးကြီးကျွတ်ထွက်သွားပါရောလား။ကောင်မလေးက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရက်ကြီးကျန်ခဲ့တာ။ ငါကလည်းသေသေချာချာကြည့်နေတာ ဆိုတော့မြင်ရတာပေါ့။ စောက်ရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကျလို့၊ဘယ်လိုမှ မထင်နိုင်စရာ နဲတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူး ၊ပြဲလန်နေတာဘဲ အသားဖြူသလောက် အစေ့ကြီးကမဲပြီး ပြူးထွက်နေတာများ ၊ရုပ်ကလေးမက်ပြီးယူမဲ့ကောင်တော့ ငါသနားတယ် ပင်လယ်ပြင် လက်ပစ်ကူးရသလိုနေမှာဘဲဟေ့ ဟား..ဟား..ဟား''
''ဘာလဲ ဆေးကိုပြောတာလား ရှိတယ်ကွ ။ တစ်ခါ ၊နှစ်ခါသုံးလောက်တော့ရှိမယ်။ဆေးပင်က ရှားတယ်လို့ ပြောတာဘဲ
''မတူဘူးတဲ့ကွ သူ့အမြစ်ရဲ့အတွင်းသားက အနီရောင်သန်းတယ်တဲ့''
''အဲတာဆိုယင် ကျနော်တို့ခြံအနောက်ဘက် ခေါင်းရင်းထောင့်မှာရှိတယ်ဗျ။အဖေက ဆူးခြုံတွေပုံထားလို့ အနား ဘယ်သူမှမသွားဘူး''
''ဟေ..မင်းအဖေလည်း သုံးနေတယ်ထင်တယ်ကွ။ဟုတ်လိမ့်မယ်။မင်းငယ်ငယ်ကဆို မင်းအဖေက တော်တော်စွံတာ။အခု မထားခင်နဲ့ညားပြီးမှ ခြေငြိမ်သွားတာ''
စကားတပြောပြောနှင့် အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာကြသည်။မောင်ခိုင်မှာမူ ကြာတယ်မထင်။သို့သော် ထွေးမြ ရှိနေမယ့် အိမ်သို့အပြေးပြန်ချင်စိတ်ကတော့ ပိုလို့သာလာပါတော့သည်။
အပြန်တွင် ကိုချစ်ခိုင်ကြီးပေးလိုက်သော ဆေးအဆီရည်ကို အိမ်ရောက်သည်အထိ မအောင့်နိုင်တော့။ လမ်းလျှောက်ယင်းပင် ပုဆိုးခြုံကာ လီးကိုသုတ်ပြီးဂွင်းတိုက်ပေးရင်း တစ်လှမ်းချင်း........................................
ထိုအချိန်တွင် မထွေးမှာနေ့ခင်းက မောင်ခိုင်လိုးထားသောကြောင့် စောက်ဖုတ်လေးထဲမှာအောင့်သလိုလို၊ ကျင်သလိုလိုနှင့်မို့ ထမီအောက်ကိုလက်ထည့်ကာ ကိုင်ကြည့်လိုက်သည်။
အဖုတ်ကလေးမှာ ပိုပြီးယားလာသလိုလိုနှင့် စောက်ခေါင်းထဲမှပွစိ ပွစိဖြစ်လာပြီး အရည်များဖြင့် ရွဲစိုလာ တော့ သည်။ လက်ညှိုးလေးဖြင့် စောက်ရည် ပျစ်ချွဲချွဲလေးများကိုကော်ယူသုတ်လိုက်ပြီး စောက်စေ့နီတာရဲလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်ရာ စေ့ကလေးမှာပြူးထောင်လာပြီး ......
'အင်း ကောင်းလိုက်တာ ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီးနဲ့ ။'
ဟိုးအယင်ကလို ကိုင်ယုံလောက်နှင့် အာသာမပြေ။
ထွေးမြတစ်ယောက်မှာ ကောင်းမှန်းသိနေတော့ အခက်သား။ကိုယ့်လက်နှင့်လောက်ကို အားမရတော့။
ထမီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ခပ်ဟဟလေးဖြဲလိုက်သည်။လက်ညှိုးလေးအပြင် လက်ခလယ် လက်ချောင်းကိုပါ စောက်ရည်ကြည်လေးများတစိမ့်စိမ့်ထွက်ပြီးနူးညံ့ကာ နွေးနွေးအိအိအပေါက်ကလေးထဲကို ထိုးသွင်းကာ မောင်ခိုင်နေ့ခင်းကလုပ်သလို သွင်းလိုက်/ထုတ်လိုက်။
'အင်း အင်း..အ အိုး..'
မျက်စေ့ကိုစုံမှိတ်ပြီး မောင်ခိုင့်ပေါင်ကြားထဲက ဟာကြီးကို မျက်စေ့ထဲပြန်လည်မြင်ယောင်ရင်း ..ပြွတ်..ဗြွတ်
အင်း..........မထွေးပြတင်းပေါက်မှ ဖွင့်ထားရဲ့လားမသိဘူး။အခါတိုင်း အိမ်ပြန်နောက်ကျလျှင် ထွေးမြက သူ့အခန်းရဲ့ပြတင်းတံခါးကိုဖွင့်ထားပေးနေကျ။လူကြီးတွေမသိအောင် ကျော်ဝင်ရသည်။ထိုအခါ သူ့ကိုသူ ကာလသားများမှတ်နေသလားမသိဘူး ညည့်နက်သန်းခေါင်လျှောက်သွားနေတယ် ဘာညာဟုပြောကာခေါင်းကို ခေါက်ပြီးစောင့်ပေးနေကျမဟုတ်လား။
ဟင်.. ပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်ထားပါလား။မတတ်နိုင်ဘူး ။ခြံစည်းရိုးတွင်ထောင်ထားသော သံတူရွင်းကိုယြူ့ပီး အသာကလန့်ဖွင့်လိုက်ရာ ချက်ချမထားသောကြောင့် တဖြည်းဖြည်းပွင့်သွားလေတော့သည်။
ထွေးမြ ဖင်တုံးလုံးနှင့်ပိုးစိုးပက်စက်ကြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကာ လက်နှင့်လုပ်နေသည်ကိုမြင်ရသောအခါ ဆေးအဆီတွေလိမ်းပေးပြီးထုလာသောကြောင့် ထွားစပြုလာသောလီးကြီးမှာ ပူခြစ်လာပြီးပေါက်ကွဲထွက်တော့ မည့်အလား အဆမတန်ကြီးထွားလာလေသည်။ရင်ထဲတွင် ကတုန်ကရင်နှင့်အသက်ရှူရပ်သွားမတတ်ပင်။
ပြတင်းပေါက်မှဝင်လာသောလရောင်အောက်တွင် ယောင်ကိုင်းနေသည့်အလား ဖူးဖူးလေး မို့မောက် ဖေါင်းကားနေသော စောက်ဖုတ်လေးကလွဲလျှင် ဘာကိုမှမမြင်တော့။
ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သည်။တန်းတန်းမတ်မတ်ပင် ထွေးမြကုတင်ခြေရင်းသို့သွားကာ ခါးကိုကုန်းပြီး သူလိုးရမည့် စောက်ဖုတ်ထဲဝင်နေသည့်မထွေးလက်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင်ဆွဲဖယ်လိုက်တော့သည်။
''အို..ဟင် မောင်ခိုင် ''
နေ့ခင်းက အဆုံးစွန်ထိဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တဏှာစိတ်များလွန်းလို့ ကိုယ့်ဘာသာလက်နှင့် လုပ်နေသည်ကို မြင်သွားတော့လည်း အရှက်သား။ မျက်နှာကိုလက်နှင့် အုပ်ထားလိုက်သည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကတော့ဖြင့် ဖြဲထားလျှက်ပင်။တကယ်ဘဲရှက်လို့လား။သည်ယုံမြင်လို့ သည်ခြုံထွင်နေတာလား ။အဲတာကတော့ ထွေးမြတစ်ယောက်ပဲ သိလိမ့်မည်။
ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကားထားပေမယ့် တရုတ်မကြီးဟာလို စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခြမ်းမှာပြဲဟမနေ။ ယောင်ကိုင်းကိုင်းလေးများတောင်ဖြစ်နေသလားထွေးမြရယ်။စောက်စေ့နီတာရဲလေးမှာမူ မောင်ခိုင့်ကို မကြောက် သည့်အလား အပြင်သို့ပြူထွက်နေလေသည်။
မိန်းမတွေနှင့်အတွေ့အကြုံနည်းသေးသော လူပျိုရိုင်းလေးမှာ ဘာဘာညာညာတွေမနှူးနှပ်တော့။ နွားသိုးကြိုးပြတ် ထွေးမြပေါ်အတင်းတက်ခွကာ စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်ချင်လွန်းလို့တဆပ်ဆပ်တုန်ခါနေသော သူ့လီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်တေ့ပြီးထိုးထည့်လိုက်တော့သည်။
နေ့ခင်းကနှင့်မတူ။ ထွေးမြမှာ ဆေးတန်ခိုးနှင့်မိုက်ရိုင်းစွာထွားကြိုင်းနေသော လီးကြီးကိုမဆန့်မပြဲထိုးသွင်း ခံရသောအခါ လူကြီးတွေကြားမှာကိုတောင်သတိမရတော့ဘဲ အော်ငြီးယင်းမောင်ခိုင့်ကို အတင်းပင်တွန်းချ၏။ လိုးရဖို့သာ အာသာငန်းငန်းဖြစ်နေသော မောင်ခိုင်မှာ ဘာကိုမှဂရုမစိုက်တော့။အတင်းပင်တွယ်ကပ်ခါ ညှောင့်နေ လေရာ...
''မောင်ခိုင် နင် ...အ..အိုး ခွေးကောင် ဆင်း.ဆင်း ဟင့်..ဟင့် ''သည်တစ်ကြိမ်မတော့ တကယ်ပင် ငိုရသည်။
မျက်နှာကိုကုတ်ခြစ်လာသော လက်များကို ချုပ်ကိုင်ယင်း မညှာမတာအချက်နှစ်ဆယ်ခန့်စောင့်ပြီးသောအခါ စောက်ရည်များတရွှဲရွှဲထွက်လာကာ ရုန်းကန်နေသောထွေးမြလက်များ အားမပါတော့။
စောင့်ချအလိုးခံလိုက်ရတိုင်း နှာခေါင်းမှလေထွက်အောင်ပင် တအင့်အင့်နှင့်။
''ပြွတ်..ပလွတ် ဖတ် ''တစ်ဝက်လောက်သာဝင်သောလီးကြီးမှာ အရင်းခိုက်အောင်ပင်။ဆီးခုံနှစ်ခု တဖတ်ဖတ်နှင့် ထိအောင်အဆောင့်ခံနေရသည်ကိုပင် အားမရနိုင်။အပေါ်တွင်မှောက်လျှက်ထပ်လိုးနေသော မောင်ခိုင့် ကိုယ်လုံးကြီးကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။
''သွား..နားရှက်တယ်'' ဘာရယ်လို့မဟုတ် လုပ်မိလုပ်ရာမောင်ခိုင့်ကျောပြင်ကို လက်သဲဖျားကလေးများနှင့် ကုတ်ခြစ်လိုက်ရာ အပေါ်မှအားရပါးရကြီးစောင့်နေသောမောင်ခိုင်ရှူးရှူးရှဲရှဲအသက်ရှူသံများထွက်လာသည်။ ကာမစိတ်များပိုမိုပြင်းထန်လာကာ လိုးနေရင်းပင်အားမရတော့။လိုးချင်နေသေးတော့သည်။
ကားထွက်နေသော လထစ်ကြီးက ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်း ချိတ်ဆွဲခံရသည်ကိုမကျေနပ်သည့်အလား အစေ့ကလေး မှာ ပိုမိုပြူးထောင်ထလာလေလေ ကောင်းကာမစပ်ရှက်သည့်အရသာကို ပိုမိုလို့သာ။သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေကောင်းလှခြည်လားရှင်တို့ရယ်။
''ဗြွတ်..ပြွတ်..ဖတ် ပလွတ်..ဘတ်..ဘတ် ''
အင်းး...ဟင်းးး အိုးမောင်ခိုင်ရယ် ...
စောက်ရည်ဖြူပျစ်ပျစ်များမှာ ဖင်စအိုဝသာမက အိပ်ယာပေါ်ကိုပင်စီးထွက်ကျလာလေတော့သည်။
ဆေးစွမ်းကြောင့်လား၊သဘာကြောင့်လားမပြောတတ်။ အားရပါးရအသကုန်လိုးထိထိမိမိကြီးခံနေရတာကြောင့် ထွေးမြ လူးလူးလွန့်လွန့်ဖြင့်ပြီးသွားသော်လည်း မောင်ခိုင့်လီးကြီးမှာသံချောင်းကြီးအလားမာတောင်နေတုန်း။ စောက်ခေါင်း လေးကိုထိုးမွှေကာ လထစ်ကြီးဖြင့်ချိတ်ချိတ်ဆွဲကာမှန်မှန်ကြီး ဆောင့်လိုးနေတုန်းပင်။ ညဦးကအဖန်ရည်သောက်တာများသွားသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ဘာညာကွိကွလဲ မလုပ်ရတာ ကြာပြီဆိုတော့စိတ်ဆာလာတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် အိပ်ယာကနိုးလာတယ်။ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိန်းမကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တရှူးရှူးနဲ့အိပ်နေတာများ ထမီတောင်လန်ပြန်လို့။ ဟင်..အမွှေးတွေရိတ်ထားပါလား။အမြင်တစ်မျိုးထူးနေတဲ့ မီးလောင်ဖုကြီးလို စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ကျုပ်စိတ်ကို မြှူဆွယ်နေသလိုဘဲ။ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ စောက်ဖုတ်မှာမြှော့ပါတဲ့မိန်းမကိုလိုးဖူးတဲ့ သူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ်။ကျုပ်မှာ တန်းတန်းစွဲ ဖြစ်နေရတာပေါ့။
ပြီးတော့ ထားခင်ကအောက်ပေးလဲကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ မနာလိုဖြစ်မနေပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်တောင် ကံကောင်းလွန်းလို့ ။
ခင်ဗျားတို့လည်း သိတဲ့အတိုင်းဘဲမိန်းမအယောက်တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင် စောက်ဖုတ်မြှော့ပါဖို့ဆိုတာ အရှားသားမဟုတ်လား။အဲတာကြောင့် ထားလေးကိုကျုပ်စွဲနေရတာပေါ့ဗျာ။
ထားခင်ဟာ ဖင်သရမ်းတယ်လို့နာမည်ပျက်ရှိပေမယ့် ကျုပ်နဲ့ကျတော့လည်းငြိမ်လို့။ကြင်နာတတ်တာလည်း လွန်ရောဘဲ။ရွာမှာဆို ကျုပ်လည်းဆရာကြီးတစ်ဆူလို မိန်းမနဲ့ပတ်သက်ယင်နာမည်ကြီးဘဲ။ပျိုပျိုအိုအို တွေ့မရှောင် အကုန်စားလို့လေ။တကယ်တော့ ကျုပ်ဟာတကူးတကလိုက်ဖန်တီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
သူတို့မိန်းမတွေက ကျုပ်ကိုလိုက်ကပ်နေကြတာဗျ။သူမတို့ယောကျာ်းတွေဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ် မသာကောင်ကြီးတွေဟာ သူတို့အာသာပြေယင်ပြီးရော တက်ခွပြီးဆော်ဖို့ဘဲ။သူမတို့ အလိုကိုနားမလည်ဘူး ဘာညာဆိုတော့ ကူညီပေးရတာပါဗျာ။ရိုင်းရိုင်းပြောရယင် ယောကျာ်းဖါလိုသဘောထားကြတာပါ။
တခုရှိတာက ကျုပ်ဟာနဲ့ထိလိုက်ပြီးယင်တော့ကျုပ်မှကျုပ်ဖြစ်သွားတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ကျုပ်သားမောင်ခိုင်ကိုလည်းပြောထားရသေးတယ်။မင်းမိန်းမယူမယ်ဆိုယင်ရွာက ကလေး မလေးတွေကိုမယူနဲ့လို့ တော်ကြာမောင်နှမချင်း ယူမိမှာစိုးလို့လေ။
ပြောရယင် မထားခင်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခံရတဲ့အလှည့်ရောက်သွားတယ်။ ထားလေးက ကျုပ်ကိုပြုစားလိုက်တယ်လို့ လူတွေက ပြောကြတာဘဲ။တခါတလေ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်သံသယဖြစ်ရတယ်။
နေ့တွေ၊ညတွေ မဟုတ်တော့ဘူး။အချိန်ရှိတိုင်း လိုးနေချင်တော့တာဘဲ။ မြှော့ပါတဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့အထိခံရတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ ဘာညာဖြစ်သွားရောဆိုတဲ့ငယ်ငယ်က ကာလသားကြီးတွေပြောတဲ့စကားကို ယုံတမ်း စကားလို့ထင်ခဲ့တာ။ ခုတော့ ကျုပ်လည်း ဆရာကြီးကနေ တပည့်ကြီးအဖြစ် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပေါ့ဗျာ။
ကျုပ်လည်း ထားခင်ကိုရွတ်ကနဲ တစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ်။လင်မယားတွေအချက်ပေး နည်းအတိုင်းပေါ့။ တနေကုန် ပင်ပန်းထားလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့။မနိုး။အိပ်ပါစေတော့လေ။
ဆီးသွားမလို့ အိပ်ယာပေါ်က အသာဆင်းပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။အလိုက်မသိတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ကြီးမားရှည်ထွားလှချည်ရဲ့လို့ မိန်းမတွေပြောကြတဲ့ငပဲကြီးကတော့ ပုဆိုးဖေါင်းနေအောင် ကိုင်းကိုင်းကြီး ထောင်နေတုန်းပင်။အိမ်သာသွားရင်းနဲ့ သားမောင်ခိုင်ရဲ့အခန်းကိုတစေ့တစောင်းလှမ်းကြည့်တော့ ပြန်မရောက် သေး။သည့်နက်လှပြီ။မနက်ကျ ခေါ်ဆုံးမရအုံးမယ်။
''အင်း..အင်း. အိုး. အိုး..အ ''တိုးတိုးလေးကြိတ်ငြီးသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျုပ်ရင်ထဲ တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတော့တာဘဲ။အသာနားစွင့်ပြီး အသံလာရာကိုကြည့်လိုက်တော့ ထွေးမြအခန်းထဲက။ ကုတင်လှုပ်သံတကြွိကြွိမြည်လို့ ''ပြွတ်..ပလွတ် ဖတ် ဖတ် အင်းးးးးအ...''
''တောက်...''ကျုပ် အခုနက ရင်ထဲလှုပ်ကနဲဖြစ်သွားတာတွေပျောက်လို့ေ၃ါသတွေအလိပ်လိပ် ထွက်လာတယ်။ ကျုပ်မှာတော့ မစားလောက်သေးလို့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့စောင့်နေတာ။ဘယ်ကောင်လာဆော်နေပြီလည်း. မသိဘူး..။
ပြူတင်းပေါက်က ဝင်လာတဲ့ လရောင်နဲ့သေသေချာချာမြင်ရတာပေါ့ဗျာ။ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲထားတော့ အဖုတ်ကလေးကဖူးဖူးဖေါင်းဖေါင်းနဲ့ ဟိုခွေးသား တအားတွယ်နေလိုက်တာများ လောကကြီး သူတို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိနေသလို။ တပြွတ်ပြွတ် တဖတ်ဖတ်နဲ့။ကုတင်တောင် ပြိုကျမှာ စိုးရတယ်။
အောက်က ဟာမလေးကလည်း သူ့အမေ အလိုးခံတဲ့ပုံစံအတိုင်း မောင်ခိုင့်တင်ပါးနှစ်ဘက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး ဖိချရင်း စကောဝိုင်းသလို ကော့ကော့ပြီးခံနေလိုက်တာများဗျာ ''စောင့် စောင့်...အိုး.အင့်..အင့် မညှာနဲ့တော့ တအားလိုး ဘလွက်..ဗြွတ်..ငါခံနိုင်ပြီ..အ..အင်း....''
အောက်ပေးကောင်းလှချည်လားကွယ့် မအေတူသမီးလေးရဲ့။ငါ့သား မင်းကံကောင်းတယ်။အေးလေ ငါလည်း တစ်နေ့ ကံကောင်းရအုံးမှာပေါ့ကွာ....ဟင်း။သက်ပြင်းကြိတ်ချရင်း ဘယ်လိုကြံရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ဘဲ အပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့ရတယ်။တံခါးကိုတော့သေသေချာချာပြန်ပိတ်ခဲ့ရတယ်။တော်ကြာ ထားခင်ကြားသွားမှဖြင့် ကျုပ်သားငတ်နေအုံးမယ်။ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ။ကာမ အရသာကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင် မြိန်မြိန်ယှက်ယှက်ကြီး ခံစားနေတာဘဲ။
မထားခင်ဘေးတွင်အသာဝင်အိပ်ယင်း နှဖူးပေါ်လက်တင်ကာ အကြံထုထုတ် စဉ်းစားနေယင်း ပေါင်လုံးတုတ် တုတ်လေးခွဆုံက အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေးကိုပြန်ပြီးမြင်လာတော့တယ်။အယင် သည်ကောင်မလေးရေချိုးလို့ လူလစ်ယင်ကျုပ်ချောင်းချောင်းကြည့်ဖူးပါတယ်။မွှေးညှင်းနုလေးတွေက ဆီးခုံမှာ ပေါက်ကာစမို့ ဖိုကနေချကာစ ပေါင်မုံ့လို တင်းတင်းလေးဗျာ။ မလိုးဘဲနဲ့ လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးထိုးပြီးလျှက်လိုက်ရယင်..တော့လား.........
''ရှင် အင်...ဟင် အကိုကြီးလီးကတအားတောင်နေပါလား''
ဦးချစ်ခင်သည် အတူအိပ်နေသော မိန်းမဖြစ်သူမထားခင်ကိုဖက်ရင်း ခေါ်လိုက်သည်။မထားခင်က သည်လို လင်မယားအတွေ့အကြုံများလို့ အထာကျွမ်းသည်။သူ့ယောကျာ်းဘာဖြစ်ချင်နေပြီဆိုတာတန်းသိလိုက်ပြီ။ ပက်လက်အိပ်နေရာမှ လှည့်စောင်းလိုက်ပြီးဘယ်လက်ဖြင့် ပေါင်ကြားထဲမှ ငေါင်းစဉ်းစဉ်းဖြင့်ထောင်ထနေသော လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှပင်လှမ်းကိုင်လိုက်လေသည်။ဦးချစ်ခင်လည်း သူ့မိန်းမနိုးလာပြီဖြစ်လို့ သူ၏ပုဆိုးကိုချွတ် ကာခြေထောက်ဖြင့်ကုတင်ခြေရင်းသို့ကန်ထုတ်လိုက်သည်။ထိုအခါ မထားခင်သည်လီးထစ်ကြီးပြဲလန်နေသော လီးကြီးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး လေး၊ငါးချက်ခန့်ထုပေးလိုက်ရာ ထောင်ထနေသောလီးတံကြီးထိပ်မှ လရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက်လာလေသည်။
''အား..ပါး ပါး '' ဦးချစ်အတွက်တော့ သူ့မိန်းမ ဘယ်လိုလုပ်ပေးပေး ကောင်းနေတော့တာဘဲ။ အဲတာတောင် သမီးဖြစ်သူကို ဆော်ချင်နေသေးသည်။လောဘ ကြီးပါပေ့ဦးချစ်ခင်။
မထားခင် လီးကြီးကိုဆုပ်ကိုင်ထားလျှက်ပင် အိပ်နေရာမှ ထလိုက်သည်။ခြောက်သွေ့နေသော သူမနှုတ်ခမ်း ထူအမ်းအမ်းကြီးကို လျှာဖြင့် လျှက်လိုက်ပြီးဂွေးလပြွတ်ကြီးကိုပြွတ်ကနဲပါးစပ်ထဲစုပ်သွင်းလိုက်သောအခါ အကြောတွေဖုဖုဖေါင်းဖေါင်းနှင့် အပြိုင်းပြိုင်းထနေသောလီးတံကြီးမှာ ဆတ်ကနဲပိုမိုတင်းတောင်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အကိုကြီးဘာအကြိုက်ဆုံးဆိုတာ သူမသိတာပေါ့။
လက်တဖက်က ကုတင်ခြေရင်းရောက်နေသော ဖက်လုံးကိုယူလိုက်ရာ ဥိးချစ်ခင် အလိုက်သင့်ပင် ဖင်ကိုကြွပေးလိုက်သည်။ခေါင်းအုံးခုလိုက်သောကြောင့် ကြွတက်လာသောဖင်စအိုဝကို လျှာဖျားလေးနှင့် ထိုးကလိခံလိုက်ရသော် ဦးချစ်ခင် တအင်းအင်း တဟင်းဟင်းဖြစ်ကာ...
''အိုကွယ်...ထားလေးရယ် အကိုကြီးကိုစွဲနေအောင် တမင်လုပ်နေတာလား.အ..အိုး....''
လက်ကလည်း လီးတံကြီးကိုလထစ်ဖျားမှ အရင်းတိုင်အောင် တင်းတင်းကြီးဆုပ်ကိုင်ပြီး တစ်ချက်ချင်း ထုပေးနေရာ လီးကြီးထိပ်မှ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကျလာသော လရည်ကြည်များကြောင့် လီးတံကြီးတစ်ချောင်းလုံး ရွဲရွဲစိုနေရာ လက်ထဲတွင် တကိုင်ကြီးနှင့် စီးပိုင်နေတော့သည်။
လမွှေးလိမ်လိမ်ကောက်ကောက်ကြီးများပေါက်နေသော ဆီးခုံကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုး 'ရွှတ်ကနဲ'နမ်းလိုက်ပြီး သူမယောကျာ်း၏ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးပေါ်သို့ တိုးဝင်တက်လိုက်သည်။ထို့နောက် ချစ်လင်၏ပါးပြင်ကို နမ်းလိုက်လေသည်။
မျက်ရည်ပူများ သူ့ပါးပေါ်စိုစွတ်သွားရာ ဦးချစ်ခင်လည်းမှိန်းပြီးနေသော မျက်လုံးပြူးကျယ်သွားပြီး စိုးရိမ်တကြီး မေးလိုက်သည်။
''ကျမ အားငယ်လို့ပါ အကိုကြီးရယ်။အကိုကြီးစိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်မပေးနိုင်တော့လို့ –ဟင့်..အဟင့်.. ကျမကို ပစ်မသွားပါနဲ့နော်''
''မင်း သားအိမ်က အောင့်တုန်းလား။ မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ဘူး။ဆေးရုံသွားပြမှ ဖြစ်မယ်။ အင်း..နော်ကူးသာ ကရောဘာပြောသေးလဲ''
မထားခင် ရွာက သားဖွါးဆရာမလေးနော်ကူးသာနှင့် ပြကြည့်ပြီးပြီ။
''အို..အကိုကြီးကလည်း ဘယ်လိုဖြေရမလဲ။မဖြေတတ်ပါဘူး။ အကိုကြီးပဲ သူများကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ခဲ့ပြီးတော့။
ပြီးတော့ မထားခင် အပေါ်ကနေပြီးဆက်ဆံဘူးလားတဲ့။ ကျမလည်း အကိုကြီးကအဲသည်လိုနည်းကြိုက်လို့ မကြာမကြာတက်တက်ဆောင့်ပေးတဲ့အကြောင်း ခပ်ကြွားကြွားပြောလိုက်တာပေါ့''
''အကိုကြီးဟာမက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ အင်း..လေ ဦးဟာကြီးက အရှည်ကြီးဆိုတော့ အမအဲသလို ဆက်ဆံတာ အရမ်းထိမှာပေါ့နော်တဲ့။ နှမျောတသတဲ့အသံနဲ့။သည်ကောင်မက သူလင်အပြင် ကာလသားတွေနဲ့တရုံးရုံးဖြစ်နေတာတောင် သူများယောကျာ်းကို တမ်းတမ်းတတနဲ့ ။စိတ်တိုတယ်။''
''ထားလေးကလဲကွာ မင်းနဲ့ညားပြီးကတည်းက ငါတစ်ခါမှ မတစ်ခါတော့တာမင်းလည်းသိသားနဲ့ ။ကဲပါ..ဘာ ဖြစ်တာတဲ့လဲ''
''ကျမလည်း ကောင်မခိုင်းသလို ထမီချွတ်ပြီးပေါင်နှစ်ချောင်းထောင်ပြီးကားပေးလိုက်တော့ အမွှေးတွေ ရိတ်မယ်နော်ဆိုပြီးရိတ်ပစ်လိုက်တယ်ရှင့််။ ပြီးတော့ လက်အိပ်စွတ်ပြီးကလိတော့တာပဲ။
ကျမလဲ မိန်းမအချင်းချင်းလုပ်ပေးတာ တခါမှမခံဘူးတော့ တစ်မျိုးကြီးနဲ့ ခံလို့ကောင်းလာတော့ အကိုကြီးကို လုပ်ပေးသလိုမျိုးညှစ်ပေးလိုက်မိတယ်။အမဟာက မြှော့ပါတာကိုး ..အဲတာကြောင့် ဦးကစွဲနေတာဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆို ကျမအစေ့ကို ကုန်းစုပ်တော့တာဘဲ။ဦးဟာကြီးနဲ့ထိုးထိုးလိုးပြီး ဦးလရေတွေ ပန်းပန်းထည့်ထားတဲ့ အမရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုမှုတ်ရတာ အရမ်းအရသာရှိတာပဲတဲ့။ နောက်တော့ အင်္ကျီကိုလှန်ပြီးသူ့နို့ပျော့တွဲတွဲကြီးနှစ်လုံးကို စုပ်ခိုင်းတယ်။ကျမလည်း အကိုကြီးလုပ် လုပ်ပေးသလိုမျိုး နို့သီးခေါင်းကလေးကိုလျှာနဲ့ထိုးထိုးပြီး နို့အုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါစုပ်စုပ်ပေးလိုက်တော့ ကောင်မ ထွန့်ထွန့်ကိုလူးနေတာပဲ။
အဲသည်အချိန်မှာပဲ ရွာအလယ်ပိုင်းက ဟိုအရက်သမားညီအကိုရောက်လာသံကြားရတယ်။ သူ့နို့ကြီးနှစ်လုံး လှန်ရက်တန်းလန်းနဲ့ထွက်သွားပြီး လာ..လာကြ...အတော်ဘဲဆိုပြီးအိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီး လိုးကြတော့တာဘဲ အကိုကြီးရယ်။ကျမရှိနေတဲ့အခန်းနဲ့ ကပ်လျှက်ဆိုတော့ ကျမလည်းထရံပေါက်က ချောင်းကြည့်လိုက်မိတယ်။
အကိုကြီးကောင်မက မတ်တပ်ရပ်လျှက်အလယ်မှာ။ဟိုညီအကိုနှစ်ယောက် တစ်ယောက်က စောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်ပြီး၊တစ်ယောက်က ဖင်ကိုလိုးနေလိုက်ကြတာ ပက်ပက်စက်စက်ကြီး။နှစ်ယောက်သား တစ်ပြိုင်တည်းစောင့် လိုက်ချိန်ဆို ကောင်မ တစ်ကိုယ်လုံးမြောက်မြောက်တက်သွားပြီး 'အင့်ကနဲ...အင့်ကနဲ' နဲ့အလိုးခံနေတော့တာပဲ။ ။ ကျမလည်း ထမီကောက်စွပ်ပြီး အခန်းထဲက ထွက်လိုက်တော့..
ကောင်မယောကျာ်းလေ သူ့မိန်းမတော်သလင်းဇာတ်ခင်းနေတာကိုချောင်းကြည့်ပြီး လီးငေါက်တောက်ကြီး ထောင်ပြီးဂွင်းထုနေတာ တွေ့လိုက်ရတော့တာဘဲ အကိုကြီးရယ်။
အဲသလို တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ ယောကျာ်း သုံးယောက်ကို အာသာဖြေပေးနိုင်တာမြင်ရတော့ ကျမလေ
ထားခင်အရမ်းချစ်တဲ့အကိုကြီးကို ထားခင်ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ကျေနပ်အောင်လုပ်မပေး နိုင်တော့ စိုးရိမ်မိတာပေါ့''
အင်းလေ အကိုကြီးအာသာပြေအောင် လက်နှင့်ဘဲလုပ်ပေးရတော့မည်။ဖင်ကိုတော့ပေးမခံရဲတော့။ဟိုအယင် ကဲခဲ့ကြစဉ်က လှေကြီးထိုး၊တပေါင်ကျော်၊စည်တော်ရွမ်း၊ပုဇွန်တုပ်ကွေး၊ခွေးလိုး....အို အများကြီး၊ နည်းမျိုးစုံနှင့်အားမရနိုင်ဘဲ ဖင်ကိုပါပေးအလိုးခံခဲ့သည်။ လထစ်ကြီးက ကြီးလွန်းလို့ဗယ်စလင်(ခေါင်းလိမ်းဆီ) ကိုဖင်ဝကော လီးကြီးကိုပါသုတ်ပြီးလထစ်ဖျားနှင့် သွေးတိုးစမ်းပြီးထိုးထိုးပေးစဉ်က ခံလို့အကောင်းသား။ နောက်လထစ်ကြီးမြုပ်သွားအောင်ထိုးချခံလိုက်ရသောအခါ....'အမလေး...အမေရဲ့..'
ပြန်တွေးမိရင်တောင်ရင်တုန်တယ်။ဖင်ကွဲသွားပြီး ၃ရက်ခန့်ချီးမပါနိုင်။ 'မထားခင်ရေ...မင်းဦးကြီးလာဟေ့။ မင်းအမေနေမကောင်းဖြစ်နေလို့တဲ့ကွာ''
မထားခင် မီးဖိုခန်းတွင်ချက်ပြုတ်နေရာမှ အမေနေမကောင်းဆိုသည့် စကားကြောင့် စိုးရိမ်တကြီးဖြင့် အိမ်ရှေ့သို့ထွက်လာသည်။
''ဟင်..ဦးကြီး ချွေးတွေသံတွေနဲ့၊ ဟောသည်မှာ ရေအေးအေးလေးသောက်လိုက်ပါအုံး။အမေက သာမန်နေမကောင်းဖြစ်တာပါနော် ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟင်''
''အေးကွာ နင့်မလဲရွာကိုတစ်ခေါက်တစ်ကျင်းတောင် ပြန်ဖေါ်မရဘူး။အခုနင့်အမေ တော်တော်နေမကောင်း ဖြစ်နေလို့ ငါလာပြောတာဘဲ။ကဲကဲ..ငါပြန်တော့မယ်။မြို့ပေါ် နည်းနည်းပါးပါးဝယ်စရာရှိတာဝယ်အုံးမှာမို့။ နင့်ဘာသာပဲသွားနှင့်တော့''
''အေးလေ..ငါတော့ အလုပ်တွေလက်စ မပြတ်သေးလို့မလိုက်နိုင်ဘူးကွာ။မင့်သမီးသာ အဖေါ်ခေါ်သွားတော့''
''နင့်မလဲ ဈေးဝယ်သူမရှိတာနဲ့ ဂျာနယ်တွေ ကောက်ဖတ်တော့တာပဲ။သူ့ကိုသူ ယောကျာ်းလေးများမှတ်နေသလားမသိဘူး''
ဟီ..ဟိ ဂျာနယ်ကြားထဲမှာမောင်ခိုင်လူဆိုးလေးပေးထားတဲ့ ပုံတွေကြည့်နေတာ သိလဲသိဘဲနဲ့။
''နင့်အဖွါးနေမကောင်းလို့ သွားရမယ် လိုက်ခဲ့''
''မလိုက်ချင်ဘူး အမေရယ်။သမီး အဝှါတွေ ဖြစ်နေလို့။အဖွါးတို့ရွာက အဝေးကြီး လမ်းလျှောက်ရမှာ''
ဦးချစ်ခင် မီးစက်ဘေးတွင် ခွတစ်ချောင်းနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေဟန်ဆောင်ရင်း နားစွင့်နေရာ'အင်း..ချဲမထိုးဘဲ ပေါက်တော့မယ်ထင်ရဲ့။စားရကံကြုံတော့ မုတ်ဆိပ်ပျားစွဲတော့တာဘဲ။'
''အကိုကြီးရေ သမီးက မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့။အကိုကြီးဘဲ လိုက်ခဲ့ပါနော်''
စိတ်ညစ်လိုက်တာ။တကယ်ဘဲ။ သူများက အလိုးမခံရတော့မှာစိုးလို့ အဝှါဖြစ်နေတယ်လို့ ညာပြောလိုက်တာ။မောင်ခိုင့်ကိုခေါ်သွားတော့ သူများကိုဘယ်သူက အဝှါလုပ်ပေးမှာလဲ။ဟင်း...
''ကဲ...ကဲထားခင် အဝတ်အစားတွေ ထုပ်ပိုးတော့လေ။တော်ကြာနေမြင့်နေအုံးမယ်။ အင်း...ပိုက်ဆံ လုံလုံလောက်လောက်ယူသွား။ပြီးတော့ သိပ်လည်းကြာကြာမနေနဲ့ကွာ။မခွဲဘူးတော့ အကိုကြီးက လွမ်းနေမှာကွယ့်''
ကလေးတွေ မရှိတုန်း မထားခင် ကြွေသွားအောင် ခပ်ချွဲချွဲလေးပြောလိုက်သည်။သူ့ပေါ်စိတ်ချ လက်ချနှင့် သံသယကင်းမှ ဟိုမှာကြာကြာနေမှာ မဟုတ်လား။
သမီးလေးရေ..ခုတော့ ဖေကြီးကံကောင်းမယ့်အလှည့် ရောက်လာပြီပေါ့။
''အေး..အေး အဲတာဆို၊ ဖေကြီးထမင်းစားချင်ပြီ ခူးတော့ကွယ်''
''အေးကွာ ကြက်ဖကလေးမှိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်နေလို့ ကြက်နာ မဖြစ်ခင်ချက်လိုက်တာ''
ဦးချစ်ခင်မှာ မိန်းမများစွာထဲတွင် အပျိုစစ်စစ်ကလေးများစွာကိုလည်း အမှန်တကယ်စားသုံးခဲ့ဘူးသူဆိုတော့ ဘယ်အနေအထားမှာ ဘယ်လိုစည်းရုံးရမည်ကို အထာကျွမ်းသည်။
အိမ်တွင်ထွေးမြနှင့် နှစ်ယောက်တည်းရှိပေမယ့် အလျှင်စလို မလုပ်။နေရာထိုင်ခင်းလုံခြုံမှုရှိကြောင်း သိနေအောင် ထွေးမြကို ကိုယ်တိုင်ခြံတံခါး၊အိမ်တံခါးများ ပိတ်ခိုင်းလိုက်လေသည်။ပြီးတော့ သွေးသားဆူဖြိုးစ အရွယ်မို့ သားဖြစ်သူနှင့်နေ့တိုင်း အဲ..ညတိုင်းပေါ့ အလိုးခံနေသည်ကိုသိပေမယ့် ...သူ့လီးကြီးနဲ့ ခံချင်လာအောင် ခံချင်လာအောင် စည်းရုံးရဦးမည်။
ပထွေးဆိုပေမယ့် ငယ်စဉ်ကတည်းက 'ဖေကြီး'လို့ခေါ်ခဲ့တော့ လေးစားတာတွေ၊ အရှက်အကြောက်တွေ ဘာမှ မရှိတော့အောင် ကြက်သားဟင်းထဲတွင် ဆေးခြောက်ကို ပိတ်ပါးလေးနှင့်ထုပ်ပြီးထည့်ချက်ထားသည်။
''ကောင်းလိုက်တာ..မွှေးကြိုင်ပြီး၊ ထမင်းမစားဘဲ ဟင်းတွေချည်းသာ ထိုင်စားချင်တော့တာဘဲ။ဖေကြီးက အရမ်းတော်တာပဲ''
''စားလေကွယ့် ဖေကြီးတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ ကာလသားချက်လို့ခေါ်တယ်။ဟင်းရည်များများသောက်ပေး''
ထမင်းစား စားပွဲအောက်မှဦးချစ်ခင်ခြေထောက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး ။တဟီဟီနှင့် ရီနေသည်။
သိလိုက်ပြီ ထွေးမြဆေးခြောက်မူးနေပြီဆိုတာ။ သူလိုချင်တာ သည်အနေအထားလောက်ပဲ။
''ဖေကြီး..သမီးလေ ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်နဲ့ရီချင်သလိုလို၊ပျော်သလို အို..ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး''
''ကဲ..ကဲ အဲတာဆိုလည်းတော်လိုက်တော့ ''
ဦးချစ်ခင်သည် ထွေးမြကိုသူကိုယ်တိုင် ချိုင်းနှစ်ဘက်ကြားလက်လှျိုလိုက်ပြီးနို့အုံလေးကို အမှတ်တမဲ့ပုံစံနှင့် မသိမသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆွဲထူလိုက်သည်။လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်သေသေချာချာဆေးကြောပေးကာ ပခုံးကိုဖက်ပြီး အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းသို့ခေါ်လာသည်။ထမင်းစား စားပွဲပေါ်တွင်မတော့ ထွေးမြလက်တရမ်းရမ်းနှင့် လျှောက်နှိုက်ထား သောကြောင့် စားလက်စများပိုးလိုးပက်လက်ကျန်ခဲ့သည်။
နှစ်ယောက်ထိုင် ကုလားထိုင်တွင် အတူယှဉ်တွဲထိုင်လိုက်ရင်း..
ဦးချစ်ခင်သည် ထွေးမြပေါင်တံလေးကို မသိမသာကိုင်ပွတ်ပေးရင်းခေါ်လိုက်လေသည်။ခြံတံခါးသာမက အိမ်တံခါးပါပိတ်ထားသောကြောင့် အပြင်မှဘယ်သူမှမမြင်နိုင်။လက်တဖက်ကလည်း ကုလားထိုင်နောက်မှီပေါ် တွင်တင်ကာ မထိတထိထွေးမြကို ဖက်ထားသလို၊မဖက်သလိုနှင့်။
''သမီး အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ''
''၁၉ နှစ်ကျော်ပြီလေ ဖေကြီးရဲ့ ''
''သမီးလေးမှာ ရည်းစားရှိနေပြီလားဟင် ''
''အာ...ဖေကြီးကလည်း၊သည်မှာကိုင်ကြည့် '' ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူမပေါင်ပေါ်ရောက်နေသောဦးချစ်ခင်လက်ကို ဆွဲယူကာ သူမနို့ကလေးပေါ်ဖိကပ်ပေးလိုက်သည်။လုံးလုံးတင်းတင်းလေးနှင့် ရှိနေတုန်းပင်။အပျိုဖြစ်စတွင် ရှိရမည့် နို့သီးခေါင်းအရင်းမှ အကြိတ်၊အခဲလေးများမှာမူ မရှိတော့။မောင်ခိုင့်လက်စာမိထားပြီးပြီ မဟုတ်လား။ အပျိုရိုင်းလေးမဟုတ်တော့သောထွေးမြ သူမဘာဖြစ်ချင်နေပြီဆိုတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင်။
ဦးချစ်ခင်လည်း ရရှိလာသောအချိန်အခါကိုအကျိုးရှိရှိအချိန်မဆိုင်းတော့ဘဲ မသိမသာမှ၊သိသိသာသာပင်ထွေးမြ ပေါင်တံတလျှောက် စုံချည်၊ဆန်ချည်ပွတ်သပ်လို့ပေးနေလေသည်။ တခါတခါအပေါ်မှဖုံးထားသော ထမီခေါက်ကြားထဲသို့လက်သွင်းပြီး ပေါင်တွင်းကြောလေးများကိုပါ ရွရွကလေးပွတ်ပေးသောအခါ....ထွေးမြမှာ ဘယ်လိုမှတင်းမခံနိုင်တော့ တလူးလူး တလွန့်လွန့် ထွန့်ထွန့်လူးကာနေလေတော့သည်။
သီးချိန်တန်သီး၊ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုပေမယ့် မထွေးလေးတစ်ယောက်မှာမူသီးချိန်မတန်သေးဘဲ၊ သီးလိုက်တဲ့ မောင်ခိုင်ကြောင့် ပွင့်ချိန်မတန်သေးဘဲပွင့်လိုက်ရလို့လားမသိ နည်းနည်းလေးတောင်အထိမခံနိုင်။ ဖေကြီးသော၊ဘာသောနားမလည်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အထိအတွေ့ကို တရှိုက်မက်မက်ခံစားချင်သည်။ ကာမ၏ကျေးကျွန်ဘဝသို့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးသက်ဆင်းရလေပြီ။
ဖေကြီးရင်ခွင်ထဲ မျက်နှာလေးကိုကွယ်ဝှက်လိုက်ရင်း တရွရွနှင့်သူမကိုကာမအမှောင်ထဲဆွဲခေါ်နေသော ဖေကြီးလက်ချောင်းကလေးများကို သူမလက်နုထွေးလေးဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။
နှုတ်ခမ်းဖျားလေးမှ မပွင့်တပွင့်။ဘယ်သူမှသင်ပေးစရာမလိုတဲ့ မိန်းမတို့ရဲ့ မွေးရာပါအတတ်ပညာနဲ့ ညုတုတုလေးပြောလိုက်သည်။ ဆေးခြောက်အစွမ်းကြောင့် ရီချင်သလိုလို၊ပျော်သလိုလိုစိတ်လေးမှသည် ရင်ထဲ တွင်ကတုန်ကရီ နှင့် လှိုက်မောလို့လာလေသည်။
''သမီးနဲ့မောင်ခိုင် ညတိုင်းလိုးကြတာဖေကြီးသိတယ် ''
'အို......ရှင် ၊' ထွေးမြမှာ ညတိုင်းလိုးကြသည်ဆိုသော စကားလုံးရိုင်းရိုင်းကြီးကြောင့် စောက်ခေါင်းလေးထဲမှ စောက်ရည်လေးများ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကျလာအောင်ပင် ရင်ထဲလှိုက်ခပ်သွားလေသည်။
ဦးချစ်ခင် ထွေးမြဖိထားသောလက်ကို အတင်းမရုန်းဘဲလက်ချောင်းလေးများကို ကာလသားဘဝက မယ်တလင် လက်ကွက်နှိပ်သလိုမျိုး ပေါင်တွင်းကြောကလေးများကို အနည်းငယ်အားထည့်ပြီး ကုတ်ပေးလိုက်သည်။
ဖိကိုင်ထားသော လက်များပြေလျှော့သွားလေတော့သည်။မျက်နှာဝှက်ထားသော ထွေးမြ၏ပါးပြင်နှင့်နားရွက်ပေါ် သူ၏နှာခေါင်းမှထွက်သက်လေပူများကိုထိအောင် မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး နားသံသီးလေးနှင့် သူ၏နှုတ်ခမ်းကိုမထိ တထိ ၊ ထိကပ်ကာ...
ဘယ်သူမှကြားမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာသိပေမယ့် လေသံတိုးညှင်းညှင်းလေးဖြင့် ပြောနေယင်း လက်ချောင်း ကလေးများက ပေါင်တွင်းကြောကိုပွတ်သတ်နှိုးဆွနေရာမှ ပေါင်ခွဆုံမှစောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကလေးကို ထမီပေါ်ကပင်အားမထည့်ဘဲ လက်သဲထိပ်ကလေးများနှင့် ပင့်ကူလေးတစ်ကောင် သားကောင်ကိုတိုက်ခိုက်နေ
သလို စုံချည်ဆန်ချည်ပြေးလွှားနေသည်။ထွေးမြရင်ထဲတွင်လည်း အာဖရိကလူရိုင်းတွေရဲ့အမဲလိုက် ဗုံသံလို တ၃ိန်း၃ိန်း၊တ၃ုံး၃ုံး ။
ကိုယ့်ခြံထဲကကြက် ဘယ်အချိန်ရိုက်ချက်ချက်ရတယ်ဆိုပြီး သမီးလေးကိုကဝေသည်ကြီးလိုပြုစားနေတာလား ဖေကြီးရယ်...တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပါတော့။
မထွေးလေးခမျာ သနားစရာပင်။ တအိုအိုနှင့် တကယ့်မုဆိုးနှင့်တွေ့တော့အလူးအလဲခံနေရလေပြီ။ ကာမကိုလိုချင်နေသောအသွေးအသားတောင့်တမှုကြောင့် ခုန်နေသောရင်ပွင့်ထွက်မသွားအောင် ဖေကြီးရဲ့ကျော ပြင်ကိုတင်းတင်းကြီးဖက်လိုက်လေတော့သည်။ဦးချစ်ခင်တစ်ယောက်မညှာမတာပင် ထွေးမြလည်တိုင်လေးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့်ဖွဖွကလေးနမ်းနေရာမှ ပြွတ်ကနဲမြည်အောင်ပင်စုပ်လိုက်သည်။
ထွေးမြလေးမှာ ငရံ့ပြာလူး တလူးလူးတလွန့်လွန့်ဖြင့် အဖုတ်ထဲမှစောက်ရည်များမှာတစိမ့်စိမ့်မဟုတ် ပွက်ကနဲ၊ ပွက်ကနဲထွက်ကုန်တော့သည်။
ဦးချစ်ခင်၏အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်များကတော့ မထွေးလေးရဲ့လည်တိုင်ပေါ်တွင် စွန်းထင်းလို့ကျန်နေခဲ့လေပြီ သူ၏အတွေ့အကြုံများအရရွှေရောင်အချိန်ရောက်ပြီ။အချိန်မဆိုင်းတော့..... သေသေသပ်သပ်နှင့်သွက်သွက်လေးပင်ထမီကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ကျင့်သားရနေသောလက်ကတော့ စောက်ဖုတ် နှစ်ခြမ်းကြား သို့ဝင်ရောက်သွားပြီး ရွှဲကျနေသောစောက်ရည်လေးများနှင့်ပလူးပလဲ စိုစိုရွှဲလို့နေလေပြီ။
စောက်ခေါင်းလေးထဲ ထိုးမထည့်ဘဲ ပြူးထောင်နေသောစောက်စေ့ကလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဖိကာ....
'တစ်၊နှစ်၊သုံး၊လေး၊........ထားခင်သမီး မင်းဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည်ရှိမလဲ....' ''ပလွတ်..ပလွတ် ပြွတ်............ '' ''အားးးးးးးးးအမေ့...အိုး ဖေကြီး..အဟင့်.....ဟင့်''
ခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေသော ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုအတင်းပူးကပ်ကာ စောက်ရည်ဖြူပျစ်ပျစ်လေးများ ပူကနဲ၊ပူကနဲ နှင့်တပွက်ပွက်ထွက်ပြီး ထွန့်ထွန့်လူးမျှခံစားပြီးထွေးမြ တစ်ချီပြီးသွားလေတော့သည်။
'သြော်..အချက်နှစ်ဆယ်ထိအောင်တောင် ခံနိုင်ရည်မရှိသေးပါလား သမီးလေးရယ်။'‘ဖေကြီးက ဘာမှန်းလဲမသိဘူးကိုယ့်သမီးလေးကို သည်လိုလုပ်ရသလား''
ထွေးမြတစ်ယောက် သူမကိုလက်ဖျားကလေးနဲ့ဘဲတို့ပြီးကာမစည်းစိမ်အထွတ်အထိပ် ပေးနိုင်စွမ်းသော ဖေကြီးရင်ခွင်ထဲအတင်းတိုးခွေ့ကာ ရင်ဘတ်ကိုဖွဖွကလေးထုယင်း ကလူကြည်စယ်နေသည်။
''သမီးလေးက သီပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘဲ''ထွေးမြပြီးသွားပေမယ့် ဦးချစ်ခင်မှာမူဘာမျှ မဖြစ်ရသေး။
သို့သော် ရှေ့ဆက် မကြိုးစားတော့။သွေးသားဆူဖြိုးစ ကာမစိတ်အပြင်းထန်ဆုံးအရွယ်ဆိုပေမယ့် ဆက်တိုက်ကြီးဆိုလျှင် အီသွားလိမ့်မည်။
''ရော့ကွယ် သမီးလေးစား''အဆင်သင့် ဆေးခြောက်များနှင့်သုပ်ထားသော လက်ဘက်သုပ်ကို တယုတယခွံ့ကျွေးလိုက်သည်။
ရေနွေးကြမ်းနှင့်ရောနှပ်ထားသောကြောင့် လက်ဘက်အစိုနှင့်ရောစပ်သုပ်ထားသော်လည်း မာဆတ်မနေ။ ဝါးစားလို့ကောင်းသည်။
''ဖေကြီးကို အရမ်းချစ်..'' ထွေးမြ ဖေကြီး၏စွပ်ကျယ်ပေါ်မှ အမဲစက်လေးကို လက်နှင့်ကုတ်ခြစ်နေယင်း တိုးတိုး ကလေးပြန်ပြောသည်။မျက်စေ့ကို အောက်ဘက်သို့မရဲတရဲ ခိုးကြည့်လိုက်ရာ ဖေကြီးပေါင်ကြားထဲမှ ဟာကြီးသည် ပုဆိုးကိုဖေါက်ထွက်တော့မည့်အလား ငြိမ့်စိ၊ငြိမ့်စိနှင့်ထောင်ထလို့နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အမယ်လေး နဲတာကြီးမဟုတ်ပါလား။ငရံ့ခေါင်းတိုကြီး နွံထဲတိုးနေသလိုမျိုး..ဟင်း..။လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ချင်စိတ်များ ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်လာသည်။
''အို...ဖေကြီးကလည်း အစားတွေဘဲ ကျွေးနေတော့မှာလား ဟင့် ''အရှိန်ကျစပြုလာသော ဆေးခြောက်တန်ခိုးများ တရိပ်ရိပ်ပြန်တက်လာကာ ဖေကြီးကိုပင်အားမရတော့။
သမီးလေးမှာ ရာဂစိတ်တွေ သောင်းကျန်းနေတာအသိသားနဲ့။
ကဲ ဘာဖြစ်လဲ..ငယ်ငယ်တုန်းက ဖေကြီးပေါင်ပေါ်တက်တက်ထိုင်သလိုမျိုးမဟုတ်။တောင်နေသောဖေကြီးလီးနှင့်စောက်ဖုတ်ကလေးထိသွားအောင် တည့်တည့်ဖိထိုင်လိုက်သည်။
ခုများတော့ ဖေကြီးကိုယ်တိုင်လည်း ကာမသွေးတွေ နဲ့ဆူပွက်လို့နေလေပြီ။ကျောပေးပြီးရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သမီးလေးရဲ့ နှဖူးပေါ်မှ ဆံစလေးများကိုနမ်းလိုက်ယင်း ဖေကြီးလက်များကတော့ရင်သားအစုံပေါ်မှာ။
''အင်း ဟင်းးး..ဖေကြီး..အ ..''ထွေးမြတစ်ယောက် ပုဆိုးတစ်ထပ်၊ထမီတစ်ထပ်ခံနေသောဖေကြီးလီးကို သူမအဖုတ်လေးနှင့်ထိကာပွတ် နေလေသည်။
ဖေကြီးလက်တစ်ဖက်က ရင်သားပေါ်မှတရွေ့ရွေ့ချင်းဆင်းကာ .......
''အီး..အ...အား..အမေ့ အိုး..အဟင့် ဟင့် ..ဖေကြီး သမီးသေးတွေပါထွက်ကျကုန်တော့မယ်။''
ပြောပြောဆိုဆိုဖေကြီးရှေ့မှာပင်ထမီကိုလှန်ကာ မတ်တတ်ရပ်လျှက်ပေါင်နှစ်ချောင်းကားပြီး သေးများတဖြန်းဖြန်း ပေါက်ချ လိုက်တော့သည်။
''အို..ဖေကြီး ..မလုပ်နဲ့ ..အ ...အ...အား..''ဦးချစ်ခင်သည် မရွံမရှာပင် ချဲကားထားသောပေခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး သေးများတစ်စက်စက်ထွက်ကျနေသော ထွေးမြစောက်စေ့ကလေးကို လျှာဖျားလေးနှင့်ထိုးကာ အငမ်းမရမှုတ်နေ တော့သည်။သေး ပူပူနွေးနွေးလေးများက ဖေကြီးပါးစပ်ထဲသို့ တစ်စက်ချင်း။
''အမယ်လေး..အား..အမေရေ..အ..အိုး......................ဖေကြီးရဲ့သမီးကိုလိုးပေးပါတော့။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လိုးလိုး သမီးခံပါ့မယ်။ အား..အဟင့် ..ဟင့်''
ဖေကြီးကိုဆွဲကိုင်ပြီး ထူလိုက်ရာ ပုဆိုး'သမီးလေးရေ...ဟိုး..ရှေးရှေးကပေါ့ကွယ်....မရှိတော့သောကြောင့် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး တောင်နေသော လီးကြီးမှာ မထွေးလေး၏ချက်တိုင်ကို ထောက်မိလေရျှာါတ်လိုက်ခံရသည့်အလား ထွေးမြတစ်ယောက် တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလို့ပင်နေလေတော့သည်။ဦးချစ်ခင်ကိုယ်တိုင်ပင်စိတ် မထိမ်းနိုင်တော့။ချစ်သမီးလေးကို ဆတ်ကနဲပွေ့ချီကာ ချစ်ဗျူဟာခင်းဖို့ ချစ်တလင်းပြင် အခန်းထဲသို့ တစ်လှမ်းချင်း။
တဟင့်..ဟင့် တခိခိနှင့်ဖေကြီးလည်ပင်းကို ဆွဲခိုလိုက်သွားသော သမီးလေးရဲ့အဖုတ်လေးထဲကတော့ စောက်ရေ တွေ တစ်စက်ချင်းထွက်ကျလို့ နေလေပြီ။ကုတင်ပေါ်သို့ အသာပင်ချလိုက်သောအခါ ဝတ်လစ်စလစ်၊ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေပြီဖြစ်သော သမီးလေးမှာ ကာမ အမှောင်ထဲဝင်ဖို့ လက်တရမ်းရမ်းနှင့်ဖေကြီးလီးကိုလှမ်းကိုင်လေသည်။အလိုက်သင့်ပင် ထွေးမြဘေးယှဉ်အိပ် လိုက်ပြီး လက်တစ်ဆုပ်စာသာရှိသောရင်သားလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းအုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ဖြင့်နို့သီးခေါင်း ကလေးကို တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် အားရပါးရကြီး စုပ်ပေးလိုက်လေသည်။
နှံပြည်စွတ်ငှက်ကလေးကို အမြောက်နှင့်ချိန်ထားသလို စောက်ဖုတ်လေးပေါ်တွင်တစ်ဝဲဝဲနှင့် အဖုတ်လေးနှစ်ခြမ်းကြားထဲ ထိုးဝင်သွားလိုက်၊ ပြူးထောင်နေသောအစေ့ကလေးကို လထစ်ကြီးနှင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပွတ်တိုက်လုပ်နေပြီး။ .....တစ်ချက၊်တစ်ချက် သွေးတိုးစမ်းသလို စောက်ခေါင်းလေးထဲ ထိုးထိုးသွင်းလိုက်ရာ....
''သမီးလေး မခံနိုင်တော့ဘူးလား။ ဖေကြီးချွတ်လိုက်ရမလားဟင်.''
''ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း..သိဘူး။ နာလည်းနာတယ်၊ဖေကြီးဟာကြီးနဲ့လည်းခံချင်တယ်။ ကွဲချင်လည်း ကွဲပါစေတော့ ...အို...ထိုးသာချလိုက်ပါတော့ဖေကြီးရယ်''
ဦးချစ်ခင်အတွက်တော့' တခါသေဘူး၊ပျဉ်ဘိုးနားလည် ' မောင်ခိုင့်အမေနှင့်ထဲက အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား။ခုလိုဘဲ စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ပါအကို/ချပါအကို၊ဆောင့်လိုက်စမ်းပါအကိုနဲ့။ တကယ်တမ်းမတော့ ကွဲပြဲစုတ်ပြတ်သွားလို့ တစ်ပတ်လောက် အနားကပ်မခံတော့။ မိန်းမယူပြီး လူပျိုလုပ်နေရသည်။သူနောက်ဆုံးသုံးခဲ့သည့်နည်းအတိုင်း ရောမပုံပြင်ကိုအသုံးချရတော့မည်။ တစ်ခန်းပြီးရင် တစ်ထစ်သွင်း၊ ရွှေသမင်လေးကထော့နဲ့..ထော့နဲ့ ဆိုသလိုမျိုး......
Posted by bluegyi at 07:12
yeyintaung 22 August 2013 at 01:42
ko pan 28 January 2014 at 03:45
Aung Myo Minn 1 March 2016 at 14:44